ကျားမခွဲခြားမှုဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများအားပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက် (2014) ၏မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုး
Mirte brom မေးလ်, Ellen Laan, Walter Everaerd, ဖိလိပ္ပုသည် Spinhoven, Stephanie နှစ်ဦးစလုံး
Published: သြဂုတ်လ 29, 2014
မျိုးသုဉ်းစကားရပ်များအတွက်အခြေအနေတွင်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုကြောင်းသစ်ကိုသင်ယူမှုတစ်ခု inhibitory ပုံစံပါဝငျသညျ။ ဒီအစာစားချင်စိတ်ကိုအပြုအမူများ၏ဇွဲရှင်းပြနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစှဲအဖြစ်ဆက်စပ်ပြဿနာများကကူညီစေခြင်းငှါအရာထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူအဖြစ်ဖြစ်ရပ်ကထောက်ခံသည်။ အဲဒါကိုလေ့လာသင်ယူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ဇွဲရှင်းပြဖို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ရှိရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုမိန်းတွင်ဤဖြစ်ရပ်အပေါ်သုတေသနချို့တဲ့နေပါတယ်။
အမျိုးသားများအတွက် (ဎ = 40) နှင့်အမျိုးသမီး (ဎ = 62) အမေရိကန်နှင့်ခြွင်းချက်လှုံ့ဆော်မှု (CSS) အဖြစ်ကြားနေရုပ်ပုံများအဖြစ်လိင်အင်္ဂါ vibrotactile ဆွနှင့်အတူတစ် differential ကိုအေးစက်ပါရာဒိုင်းပါဝင်ခဲ့။ မှီခို variable တွေကိုလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ, ကိုထိခိုက်အမေရိကန်မျှော်မှန်းနှင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်နှင့် CSS ဆီသို့ဦးတည်လိုတဲ့သဘောထားကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးအခြေအနေတွင်ခြယ်လှယ် (ABA ခွအေနအေ vs. AAA) ကလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။
တုံ့ပြန်အေးစက်လိင်အင်္ဂါ၏အဘယ်သူမျှမသက်တမ်းတိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ရှိနိုင်ပေမယ့်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှု (ABA) ကိုအောက်ပါအမေရိကန်မျှော်မှန်းထားတဲ့သိသာပြန်လည်နာလန်ထူသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္၏ပြန်လည်နာလန်ထူထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ ABA အတွက်သင်တန်းသားများကိုလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ပိုပြီးချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်လူသားတွေအတွက် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုး၏ဆက်စပ်မှီခိုထောက်ခံပါတယ်။ ဤသည်ကိုသိကျွမ်းခြင်းထိုကဲ့သို့သော hypo- နှင့် hypersexuality အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်နှောင့်အယှက်၏ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။
ကိုးကား: brom M က, Laan အီး, Everaerd W က, Spinhoven P ကို, နှစ်ဦးစလုံး conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ချက်များက S (2014) မျိုးမျိုးမသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုး။ PLoS ONE9(8): e105955 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0105955
အယ်ဒီတာ: Alexandra Kavushansky, Technion - အစ္စရေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ Israelသရေလ
Received: မေလ 30, 2014; လက်ခံခဲ့သည်: ဇူလိုင်လ 24, 2014; Published: သြဂုတ်လ 29, 2014
မူပိုင်: © 2014 brom et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာကိုရရှိနိုင်: အဆိုပါစာရေးဆရာတွေ့ရှိချက်အခြေခံအားလုံး data တွေကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိချက်အခြေခံဒေတာအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဤသည်သုတေသနပညာရှင်ဒေါက်တာအက်စ်နှစ်ဦးစလုံးမှချီးမြှင့်သိပ္ပံသုတေသနများအတွက်နယ်သာလန်အဖွဲ့အစည်း (NWO) ၏ထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာအခင်းအကျင်းတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ် relapse အပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှထင်နေသည် , ။ စကားစပ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကောင်းဆုံးသက်တမ်းတိုး၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းအားဖြင့်ပုံအောဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းတိုးအခြေအနေတွင်အပြောင်းအလဲ၏ရလဒ်အဖြစ်ငြိမ်းအေးအပြုအမူများပြန်လည်နာလန်ထူကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် ။ အဆိုပါသက်တမ်းတိုးဖြစ်ရပ်ဆန်းထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်အပါအဝင်မြောက်မြားစွာစစ်ကူ, အပေါ်အခြေခံပြီး Pavlovian နှင့်တုံ့ပြန်ဆာပများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး  နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ် ။ ကံမကောင်းစွာပဲလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုမိန်းအတွက်မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးအပေါ်လေ့လာမှုများလုံးဝချို့တဲ့နေကြတယ်, မျိုးသုဉ်း-based ကုသမှုအတွက်သူ့ရဲ့ဆက်စပ်မှုပေးတော်မူ၏။ ပစ္စုပ္ပန်စက္ကူတှငျကြှနျုပျတို့လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အခွအေနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးတခုတခုအပေါ်မှာစမ်းသပ်မှုသတင်းပို့ပါ။
မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုမော်ဒယ်များအဆိုအရ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစိတ်ခွန်အားနိုးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့အထိခိုက်မခံပြည်တွင်းရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်၏ဆက်စပ်မှုတွေ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုဟုခေါ်ကြသည် , ။ သူတို့ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုး valence ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဂိုဏ်း၏ရလဒ်အဖြစ်ခြွင်းချက်မရှိသို့မဟုတ် conditional နိုင်ပါတယ် ။ တချို့ကလှုံ့ဆော်မှု (ဥပမာလိင်အင်္ဂါထိတွေ့) (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးသင်ယူမှုသမိုင်းမပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူနိုင်သောလှုံ့ဆော်မှု) နှင့်ထို့ကြောင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ထမ်းဆောင်နိုင်ပေမယ့်အများအပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပင်ကိုစရိုက်ကလိင်ကအရည်အချင်းမဟုတ်ပင်လိင်အရည်အချင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လိင်ကအရည်အချင်းလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသောတွေကိုပုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူမိမိတို့၏အသင်းအဖွဲ့မှတဆင့်သင်ယူမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုရရှိစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတချို့အပါအဝင်အများအပြားလေ့လာမှုများ, လူသားများအတွက် conditional လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုသရုပ်ပြပါပြီ ။ ဂန္အေးစက်မှာခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) နဲ့ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (NS) ၏ထပ်ခါတလဲလဲအသင်းအဖွဲ့တော်အားဖြင့်, NS နောက်ဆုံးမှာအမေရိကန်ကဲ့သို့တူညီသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ NS မဟုတ်တော့တဲ့တုန့်ပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းအတွက်ထိရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့် conditional လှုံ့ဆော်မှု (CS), အ CS အခြေအနေများကိုတုန့်ပြန် (CR) ဟုခေါ်သည်ဖို့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်လာသည်ကတည်းက , ။ အဆိုပါ CS မဟုတ်တော့ဆန္ဒရှိဟောကိန်းထုတ်သို့မဟုတ်အမေရိကန် appetitive အဖြစ်အမေရိကန်မရှိဘဲ CS ၏နောက်ဆက်တွဲထပ်ခါတလဲလဲတင်ပြချက်များ, တုံ့ပြန် conditional ၏ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာစေမည် ။ ဤသည်သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည် မျိုးသုဉ်း ထိုသို့ထိတွေ့မှုကုထုံးများအတွက်အဓိကယန္တရားဖြစ်ထင်နေသည်အဖြစ်သိသာလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ် -။ ထိတွေ့မှုကုထုံးများတွင်အေးစက်တုံ့ပြန်မှုက (အမေရိကန်) ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုသည့်အဖြစ်အပျက်၏မရှိခြင်းအတွက် cue (ထို CS) ကိုထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်ရွေ့ထိတွေ့မှုအားဖြင့်လျော့နည်းသွားသို့မဟုတ် inhibited နေကြသည်။ သို့သော်များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီ '' ကုသ '' ခံရပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်။ CS-တစ်ဦးတည်းတင်ဆက်အေးစက်တုံ့ပြန်မှုငြိမ်းအေးစေခြင်းငှါပေမဲ့ထို့ကြောင့်သည်, မျိုးသုဉ်းလုပျထုံးလုပျနညျးဟာမူလကလေ့လာသင်ယူ CS-အမေရိကန်အသင်းအဖွဲ့ဖျောက်ဖျက်ဖို့မထင်ထားဘူး။ ဒါဟာမူရင်းအသင်းအဖွဲ့ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းပေါ်လာသည် .
အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအခြေအနေတွင်ထဲကတစ်ဦးအခြေအနေတွင်ပြောင်းကုန်ပြီအောက်ပါ '' သက်တမ်းတိုးဖို့ 'နိုငျတုံ့ပြန်အေးစက် ။ သင်ယူမှုလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ဖို့သက်တမ်းတိုးဖြစ်ရပ်ဆန်း Extrapolating အခြေအနေတွင်ခအတွက်အခြေအနေတွင် A နှင့်မျိုးသုဉ်းအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လာသောအခါသက်တမ်းတိုး, အခြေအနေတွင်တစ်ဦးအတွက်မဟုတ်ဘဲအခြေအနေတွင် B ကိုအတွက်နေအိမ် (အခြေအနေတွင်တစ်ဦး) မှာအင်တာနက်-လိင်အဘို့အစွဲလမ်းဝယ်ယူတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်က CR ၏ပွနျလညျထူထောငျဖွစျပါသညျ နှင့်အောင်မြင်စွာကုထုံးဆက်တင် (အခြေအနေတွင် B) မှ cue ထိတွေ့မှုကုထုံးအားဖြင့်ငွိမျးသည်ထိုကဲ့သို့သောနေအိမ် (စကားစပ်က) မှာကွန်ပျူတာနောက်ကွယ်မှထိုင်လျက်အဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေတွင်အပေါ်သို့ခိုင်မာတဲ့တဏှာတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေတွင်အပေါ်သို့မှီခိုငြိမ်းအေးအေးစက်သောယူဆချက်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကထောက်ခံထားသည် ။ လူသားမြားသညျတှငျ, သက်တမ်းတိုး၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းအဓိကအားဖြင့်စွဲလမ်းအပေါ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် Paradigm သို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် , -။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကုသမှုအခြေအနေတွင်ထံမှကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေတွင်စမ်းသပ်ပြီးကြသောအခါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်းသရုပ်ပြနေသည် ။ Vansteenwegen et al က differential ကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်စမ်းသပ်မှု၌တည်၏။ တစ်ဦးလတ်မျက်နှာ (CS +) ၏တစ်ဦးကြားနေဆလိုက်ကျယ်သောဆူညံသံ (အမေရိကန်) နဲ့တွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ CS + ပု CS- မဟုတ်ပါဘူးသော်လည်း, အမေရိကန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခံသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဖြစ်ပါတယ်။ conditional ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအခြေအနေတွင်အမေရိကန်မရှိဘဲ CS တင်ပြခြင်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းစမ်းသပ်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာအလင်းရောင်ကြိုးကိုင်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောနှင့်ဝယ်ယူဖြစ်စေမှောင်မိုက်သို့မဟုတ် illuminated ခန်းထဲမှာရာအရပျကိုယူခဲ့ကြသည်။ မူရင်းဝယ်ယူအခြေအနေတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ ABA သက်တမ်းတိုး) မှပြန်လာသောအခါ, CS + သို့တုံ့ပြန်အေးစက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသစ်တဖန်။ Effting နှင့် Kindt  Vansteenwegen et al အသုံးပြုသောအဖြစ် ABA သက်တမ်းတိုးပါရာဒိုင်းအတွင်းလူသားမြားသ၌ဤသက်တမ်းတိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံတူကူးယူ။ အမေရိကန်အဖြစ်လှုပ်ခြင်း၏အသုံးချနေ။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်သို့သျော, electrodermal တုံ့ပြန်မှုအဘို့အဘယ်သူမျှမကြံ့ခိုင်သက်တမ်းတိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုသရုပ်ပြနိုင်ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအေအတွက် CS- မှ CS + ဆွေမျိုးဖို့အမေရိကန်မျှော်မှန်း ratings တစ်သိသိသာသာတိုးမှုအပြီးဆက်စပ်ပြောင်းခြင်း။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Conditions တုံ့ပြန်မှု၏သက်တမ်းတိုးဘို့သက်သေအထောက်အထားစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်တစ်ဦးအခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှုအောက်ပါလည်းမရှိ ,.
လူ့သင်ယူမှုအတွက်သက်တမ်းတိုး ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများမကြာသေးမီနှစ်များတွင်စုဆောင်းခဲ့သော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ conditional တုံ့ပြန်မှု၏သက်တမ်းတိုးအပေါ်လေ့လာမှုများသင်ယူ maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများအတွက်ထိတွေ့-based ကုသမှုမဟာဗျူဟာများအတွက်တတ်နိုင်သမျှအရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိနေသော်လည်းချို့တဲ့နေကြသည်။ paraphilia, hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်အများစုအမျိုးသားများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်အဆိုပါတွေ့ရှိချက် ,  ယောက်ျားတိုးမြှင့် CR ဝယ်ယူအတွက်ရရှိလာတဲ့, အမျိုးသမီးများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပိုမိုလက်ခံသောအယူအဆမှဦးဆောင်ထားပါတယ် ။ အေးစက်လေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုရောနှောလျက်ရှိသည်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုတည်ရှိကြပါလျှင်သို့သျော, ပစ္စုပ္ပန်မှာ, ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး -။ သို့သျောလညျး, သုတေသနတစ်ခုကျယ်ပြန့်ပမာဏကို neurotransmitter dopamine ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသထားပါတယ် -နှင့် dopamine အာရုံခံများ၏အရေအတွက်ကျား, မကွဲပြားမှုလိင်ခရိုမိုဆုန်းအဖြည့်အပါအဝင်အများအပြားအချက်များ, ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်အဖြစ် အဆိုပါ Sry ဗီဇ၏ရှေ့မှောက်တွင်  နှင့် gonadal ဟော်မုန်းကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပိုမိုလက်ခံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားတည်ရှိနေပါဘူး သို့ဖြစ်. thinkable ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ရငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ salience တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောဆားကစ်၏ Steroid တစ်မျိုးမှီခိုအဖွဲ့အစည်းအာရုံခံအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုအထိခိုက်မခံကာလဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနဲ့ပေါင်းစပ်ဒီ , လူများအတွက်, မိန်းမတို့အဘို့ထက်ပိုအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဦးစားတစ်ဦး amygdalo-hypothalamic လမ်းကြောင်းစုဆောင်းသောတွေ့ရှိချက် , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံရသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်ယောက်ျားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးသညျအလှနျအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အဖြစ်သတ်မှတ်အရေးပါကာလ, စဉ်အတွင်းစောစောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံများကလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြောင်းအဆိုပြုနေသည် , ။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်ပိုပြီး '' ခေါ်ဆောင်သွား plasticity '' ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည် ။ ယခင်လေ့လာမှုများ၏ဆနျ့ကငျြရလဒ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကျား, မကွဲပြားမှုများထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အရေးပါမှုကိုထောက်ပြ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အခွအေနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Effting နှင့် Kindt များ၏စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း  အနီးကပ်ကြောင့်ယခုလိင်ပျြောမှေ့စထိတွေ့နိုင်သောလှုံ့ဆော်မှု (vibrotactile လိင်အင်္ဂါဆွ) ကိုအမေရိကန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် မှလွဲ. နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကကြားနေဓါတ်ပုံတွေကို CSS အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ထိခိုက်စေ, ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအမေရိကန်မျှော်မှန်း ratings နှင့်လိင်အင်္ဂါ arousal မှီခို variable တွေကိုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများ (AAA နှင့် ABA) တွင်သင်တန်းသားများကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့ချဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့သည့်ဝယ်ယူစုံစမ်းပြီးနောက်တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပြသမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သက်တမ်းတိုးထားတဲ့အညွှန်းကိန်းကြောင့်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှုအပျေါမှာ, အ ABA ခွအေနအေအေးစက်ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့နှိုင်းယှဉ်ပါကစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်တုံ့ပြန်၏ပြန်လည်နာလန်ထူပြသမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမတိုးသည့် AAA အခြေအနေကဤစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်မှု Compatibility ကိုတာဝန် (ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှား Task ကို, AAT စ) CS ဆီသို့သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ရန်ပါဝင်သည်ခဲ့သည် ။ ဒါဟာသုဉ်းပြီးနောက်အခြေအနေတွင်ပြောင်းလဲမှုအပျေါမှာ, အ ABA အခြေအနေသင်တန်းသားများကို AAA ခွအေနအေအတွင်းသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် AAT အပေါ် CS- မှ CS + ဆွေမျိုးတုံ့ပြန်အားကောင်းချဉ်းကပ်နည်းကိုပြသမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
Written သဘောတူညီခကျြပါဝင်မှုအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ပါဝင်သူမှရရှိသောခဲ့သည်။ သုတေသနသင်တန်းသားများကို 40 ယောက်ျားနဲ့ 62 အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကို (€ 30, -) ပေးဆောင်ခဲ့ကြသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်သင်တန်းအကြွေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်းနှင့် Leiden နှင့်အမ်စတာဒမ်၏တက္ကသိုလ်များမှာခံခဲ့ရသည်။ Inclusion စံခဲ့ကြသည်: 18 အကြားအသက်အရွယ် - 45 နှစ်နှင့်တစ်ဦးလိင်ကွဲတိမ်းညွတ်။ ဖယ်စံခဲ့ကြသည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, တစ်ဦးထိခိုက်စေသို့မဟုတ် psychotic ရောဂါသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု, ကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်းသို့မဟုတ်ဆေးအသုံးပြုခြင်း။ အဆိုပါလေ့လာမှု Leiden University Medical Center က၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Ethical ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
အခြားစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု (CS-) လိင်အင်္ဂါ vibrostimulation အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဘယ်တော့မှမခံခဲ့ရသော်လည်းတဦးတည်းနှိုးဆွခြင်း (CS +) နှင့်အတူစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းပါဝင်ပတ်သက် differential ကိုအေးစက်ခြင်း, ဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါ vibrostimulation (အမေရိကန်) ကနောက်တော်သို့လိုက်ခံရခြင်း။ အဆိုပါ CS + အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှု၏ဘယ်သင်တန်းသားများနှင့်အခြေအနေများဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ABA အခြေအနေ, သင်တန်းသားများကိုတဦးတည်းအခြေအနေတွင် (ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဦး), အခြားအခြေအနေတွင် (ဆက်စပ် B က) တွင်မျိုးသုဉ်းနှင့်မူရင်းဝယ်ယူအခြေအနေတွင် (ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဦးက) တွင်သက်တမ်းတိုးဘို့စမ်းသပ်အတွက်သင်ယူမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAA အခြေအနေ, ဝယ်ယူ, မျိုးသုဉ်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတဦးတည်းနှင့်အတူတူပင်အခြေအနေတွင် (ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဦးက) တွင်ရာအရပျကိုယူ။ context A နှင့် B အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောအလင်းရောင်၏အရောင်များကိုသင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့ကြသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုသိထားခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့ကိုတွေ့မြင် ပုံ 1.
ပုံ 1 ။ နှစ်ဦးစလုံးစကားစပ်အခြေအနေများအတွက်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏သိထားကိုယ်စားပြုမှု။
အဆိုပါ AAA-အခြေအနေ, ဝယ်ယူအဆင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်နှင့်စမ်းသပ်အဆင့်တူအလင်းရောင်အခြေအနေတွင်ရှိကြ၏။ အဆိုပါ ABA-ခွအေနအေအတွက်မျိုးသုဉ်းအဆင့်ဝယ်ယူအဆင့်နှင့်စမ်းသပ်အဆင့်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအလင်းရောင်အခြေအနေတွင်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်မှာတော့သင်တန်းသားများကို CS + လေး nonreinforced တင်ပြချက်များနှင့် CS- လေးတင်ပြချက်များကိုမြင်တော်မူ၏။ ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင်ဝယ်ယူအဆင့် CS + နှင့်အမေရိကန်အကြားအရေးပေါ်သင်ယူခဲ့သည်။ ဒီအဆင့်စဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- နှစ်ဦးစလုံး 10 ကြိမ်တစ်ဦးချင်းစီတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်နှင့် CS + အမြဲတမ်းအမေရိကန်ကနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အားလုံးအခြေအနေများဝယ်ယူအတွက်သင်တန်းသားများကိုဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအေရာကိုယူသည်မျိုးသုဉ်းအဆင့် 10 unreinforced CS + တင်ပြချက်များနှင့် 10 unreinforced CS- တင်ပြချက်များပါဝင်သည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်3တစ်ဦးစမ်းသပ်အဆင့် unreinforced CS + တင်ပြချက်များနှင့်3unreinforced CS- တင်ပြချက်များတင်ပြခဲ့ပါသည်ပြီးနောက်။ မြေတပြင်လုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလ (ITIs) စဉ်အတွင်း 20, 25, ဒါမှမဟုတ် 30 ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ITI ၏အရှည်၏အမိန့်နှစ်ခုသာအဆက်ဆက်အရှည်၏ကန့်သတ်နှင့်အတူကျပန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAA အခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့, မျိုးသုဉ်းဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်, အ ABA ခွအေနအေသုဉ်းအတွက်နေချိန်မှာပါဝင်သူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအခြေအနေတွင် (ဆက်စပ် B က) တွင်ရာအရပျကိုယူ။ စမ်းသပ်ခြင်းအေးစက်သက်ရောက်မှုများအတွက်အခြေခံဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦး2(CS- vs. CS +) ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းအတွင်း 10 (စမ်းသပ်ခြင်း) ×ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်စမ်းသပ်ခြင်းသက်တမ်းတိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အခြေခံဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦး2(CS- vs. CS +) ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်းအတွင်း3(စမ်းသပ်ခြင်း) ×ဖြစ်ခဲ့သည်။
(ကြည့်ရှု စာသားမ S1) နှစ်ဦးကြားနေဓါတ်ပုံတွေကို CS + နှင့် CS- အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်ပုံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ဦးခေါင်းတစ်ခုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကာတွန်းကဲ့သို့ပုံဆွဲပုံဖော်။ ပုံအကြားကြားကာလစဉ်အတွင်းအဖြူရောင်မျက်နှာပြင်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CS + နှင့် CS-9s ကိုအသီးအသီးအဘို့တင်ပြခဲ့ကြသည်။
လိင်အင်္ဂါ vibrostimulation ။
(ယူအက်စ်) 8 s ကို2s အတွက်တစ်ဦးချင်းစီ CS + ရဲ့ start ပြီးနောက်ဝယ်ယူအဆင့်ကာလအတွင်းသာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ အထီးသင်တန်းသားများအဘို့, vibrotactile လိင်အင်္ဂါဆွရုံ Coronal ခေါင်အောက်ကသင်တန်းသားများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်နေရာချခဲ့သောတစ်ဦးလက်ကိုချွတ်လက်စွပ်-shaped vibrator (Aquasilks), ဖွငျ့အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ မိန်းမတို့အဘို့, သေးငယ်တဲ့လက်ကိုချွတ် vibrator (2 စင်တီမီတာအချင်း) ကိုအစေ့အပေါ်ထားရှိ, အသုံးပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုကဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက် vibrator နေရာညွှန်ကြားခဲ့သည် အများဆုံးလိင်နှိုးဆွ.
အခင်းအကျင်းတစ်ခုပန်းရောင်သို့မဟုတ်တစ်အဝါရောင်အလင်းဖြစ်စေအတွင်းစမ်းသပ်တဲ့အခန်း illuminating အားဖြင့်ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြသည်။ အလင်းရောင်တပြင်လုံးကိုအခန်းတစ်ခန်းတစ်ဦးအနည်းငယ်မှိန်အရောင် illumination အတွက်ရရှိလာတဲ့, (နှစ်ခုပန်းရောင်လေးအဝါရောင်ပြွန်) 36 W ကခြောက်ချောင်းပြွန်နှင့်အတူတစ်ဦးသည် frame များကထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ထားတဲ့ကပ်လျက်အခန်းတစ်ခန်းကနေအလင်းရောင်ထိန်းချုပ်ထား။
လိင်တံ၏လုံးပတ်ပြောင်းလဲမှုများအကဲဖြတ်ထားတဲ့အင်ဒီယမ် / ဂယ်လီယမ်-In-ရော်ဘာ penile gauge ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် ။ အဆိုပါ penile gauge ချိန်ညှိထားသောကွင်းအစုတခုသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီဓာတ်ခွဲခန်း session တစ်ခုမတိုင်မီချိန်ညှိခဲ့ကြ ။ သင်တန်းသားများကို penile ရိုးတစ်လျှောက် gauge တစ်ဝက်တစ်ပျက်နေရာညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ gauge တိုးချဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လျှပ်စစ်ထွက်ရှိမှုအတွက်အပြောင်းအလဲများတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်, DC signal ကိုကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအင်ဒီယမ် / ဂယ်လီယမ် penile gauge Sekusept ပေါင်းပိုးသန့်ဆေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ, တစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက် disinfected ခဲ့ကြသည်။ Sekusept ပေါင်းအရေးယူရောင်စဉ် mycobacteria, မှိုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ (ဥပမာလူ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ [HPV ပိုး]) (MedCaT BV) အပါအဝင်ဘက်တီးရီးယားဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ Glucoprotamine, ပါဝင်သည်။
အင်္ဂါဇာတ်သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင် (VPA) ကအကဲဖြတ်တဲ့ Vaginal photoplethysmograph သုံးပြီးတိုင်းတာခဲ့သည်  (ကြည့်ရှု စာသားမ S1) ။ အဆိုပါ photoplethysmograph အနေနဲ့လိမ္မော်ရောင်-အနီရောင်အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့် photocell င်တစ်ဦးရာသီ tampon အရွယ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ အဆိုပါအလင်းအရင်းအမြစ်ကအတွင်းအင်္ဂါဇာတ်ထရံဆံချည်မျှင်သွေးကြောအိပ်ရာနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ထှနျးလငျးပေးပါ။ အဆိုပါ photoplethysmograph အသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးပလာစမာပိုးသတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖွငျ့ LUMC မှာ disinfected ခဲ့သည်။ plasma ပိုးသတ်အားလုံးအော်ဂဲနစ် (နှင့် In-အော်ဂဲနစ်အချို့) ပစ္စည်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်အခြေခံ, ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်, ဝယ်ယူ, မျိုးသုဉ်းနှင့်စမ်းသပ်မှုအဆင့်အနားယူနေစဉ်အတွင်းစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလဒိဋ္ Ratings အဖွဲ့။
အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကို, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အမေရိကန်မျှော်မှန်း၏ ratings ယင်း preconditioning-, extinction- နှင့်စမ်းသပ်အဆင့်စဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံး "ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ CS တင်ဆက်မှုပြီးသည်မှနောက်မှုနှုန်းဖို့ CSS ၏အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကိုဟုမေးခဲ့သည်ဤပုံကိုသင်၌ခံစားမှုအဘယျသို့သောကျလာသောပါဘူး? "ကနေကွဲပြားတဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာခုနစ်မှတ် Likert စကေးအပေါ် အလွန်အနုတ်လက္ခဏာ သို့ အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့။ ထို့နောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ "ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့် rated ခဲ့သည်သငျသညျဤပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုလိင်စိတ်နိုးထဖြစ်ပါသည်? "ကနေကွဲပြားတဲ့ခုနစ်မှတ်စကေးအပေါ် လိင်မှာအားလုံးနှိုးဆွမဟုတ် သို့ အလွန်လိင်နှိုးဆွသော။ ထို့နောက်အမေရိကန်မျှော်မှန်း "ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းအားဖြင့် rated ခဲ့သည်အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိသင်ဤရုပ်ပုံပြီးနောက်တုန်ခါမှုကိုမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး"? '' ကနေတံဆိပ်ကပ်ခုနစ်မှတ်စကေးအပေါ်ဆက်ဆက်အဘယ်သူမျှမတုန်ခါမှု '' 'ရန်အကယ်စင်စစ်တစ်ဦးတုန်ခါမှု ''.
ရှောင်ရှား Task ကိုချဉ်းကပ်။
(AAT; တွေ့မြင် စာသားမ S1) ။ ဤတာဝန်သည်ပါဝင်သူများအားရုပ်ပုံများ၏မသက်ဆိုင်သောအင်္ဂါရပ်ကို၎င်းတို့ဆီသို့ Joystick လက်ကိုင်ကိုဆွဲခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တွန်းထုတ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်းတုံ့ပြန်ခြင်းအားဖြင့်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ပမာဏမှာမူတည်သော variable ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများကိုစမ်းသပ်မှုမှ CS + နှင့် CS- ဓာတ်ပုံများ၊ အနုမြူပုံသဏ္objectsာန်များနှင့်ကာစီနိုပုံများနှင့်ကာတွန်းပုံများနှင့်အတူတင်ဆက်ခဲ့သည်။ စာပေသည်ချဉ်းကပ်မှု / ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိုင်းတာရာတွင် AAT ၏တရားဝင်မှုကိုထောက်ခံသည် .
တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူအတူတူလိင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်စမ်းသပ်နေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအသိပေးသဘောတူညီခကျြပေးထားခဲ့ပြီးနောက်, စမ်းသပ်စမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် plethysmograph, penile gauge နဲ့ vibrator ၏အသုံးပြုမှုကိုကရှင်းပြသည်။ ထို့နောက်စမ်းသပ်သည့်ပါဝင်သူပုဂ္ဂလိကပိုင်ဟာလိင်အင်္ဂါပစ္စည်းတွေနေရာချခွင့်ပြုပါရန်အခန်းထဲထားခဲ့၏။ နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်ဟာမော်နီတာပေါ်မှာရေးထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်မှတဆင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ5မိနစ်ငြိမ်ဝပ်ရာကာလတစ်ကြားနေရုပ်ရှင်ကစားခဲ့လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏အခြေခံတိုင်းတာသည်လွန်ခဲ့သော2မိနစ်စဉ်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြရသောကာလအတွင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ထိုအခါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်, ဝယ်ယူ, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်အဆင့်လိုက်ကြ၏။
အဆိုပါပါဝင်သူအဆိုပါလိင်အင်္ဂါ devices တွေကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ချက်ချင်းစမ်းသပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးနှင့်သည် AAT မူရင်းဝယ်ယူအခြေအနေတွင် (က) တွင်ကဲ့သို့တူညီသောအလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်အတူစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAT ပြီးသွားချိန်အသက်အပိုင်းအခြားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို (ဥပမာ FSFI, IIEF) အကြောင်းကိုမေးခွန်းလွှာအတွက်ဖြည့်သင်တန်းသားများ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုထွက်ပေါက်အင်တာဗျူးမေးခွန်းလွှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးကဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ် (VSRRP98; စိတ်ပညာ၏နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန, အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်ကတီထွင်) ကလိင်အင်္ဂါ data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ penile လုံးပတ်ဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်2မိနစ်ငြိမ်ဝပ်ရာအခြေခံကာလအတွင်း VPA အဆင့်ကိုတွက်ချက်ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုတာ။ အဆိုပါ CSS ဖို့လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုသုံးအောင်းနေချိန်ပြတင်းပေါက်များတွင်သွင်းယူခဲ့ကြသည်: 4-8, 9-12 နှင့် 13-16 s ကိုအောက်ပါ CS စတင်ခြင်းအသီးသီးထင်းရူး (ပထမကြားကာလတုံ့ပြန်မှု), Sir (ဒုတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှု) နှင့် TIR (တတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှု) စဉ်အတွင်း ။ ထင်းရူး, Sir နှင့် TIR များအတွက်အပြောင်းအလဲရမှတ် CS တင်ဆက်မှုအောက်ပါလိင်အင်္ဂါအတိုင်းအတာထဲကနေယုတ်လိင်အင်္ဂါကျိန်းဝပ်အခြေခံနုတ်အားဖြင့်အသီးအသီး CS တင်ဆက်မှုများအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုများအတွက်၊ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်သက်ရောက်မှုများကို Mixed ANOVA (SPSS ရှိ General Linear Model)၊ Stimulus နှင့် Trial ကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာနှင့်အချက်များအကြားအခြေအနေအရခွဲခြားထားသည်။
ပုဂ္ဂလဒိဋ္တိုင်းတာပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး AAT ရမှတ်များပေါင်းစပ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များနှင့်အခြေအနေနှင့် saubjects အချက်အကြားအဖြစ်ကျားအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်နှင့်အတူရောနှောထားသော ANOVA အတူစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဖန်လုံအိမ်-Geisser ဆုံးမခြင်းထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်အတွက်အလင်းဆုံယူဆချက်၏ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ချိန်ညှိရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်, ဝယ်ယူ, မျိုးသုဉ်းနှင့်စမ်းသပ်မှုအဆင့်သီးခြားစီဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ effect အရွယ်အစား (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကှဲလှဲ၏အချိုးအစားအဖြစ်အစီရင်ခံကြသည် ) .
အဆိုပါ AAT အဘို့, ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များတစ်ဦးချင်းစီပုံရိပ်အမျိုးအစားများအတွက်ပျမ်းမျှရှောင်ပါ RT ကိုထံမှပျမ်းမျှချဉ်းကပ် RT ကိုနုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့နည်းလမ်းများထက်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်မှလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ကြောင့်ပျမ်းမျှ RTs အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အပျက်သဘောဆောင်သောရမှတ်တစ်အတော်လေးပိုမြန်ချဉ်းကပ် RTs နှိုင်းယှဉ်ရှောင်ရှားညွှန်ပြသော်လည်း။ တစ်ဦးအပြုသဘောဘက်လိုက်မှုရမှတ်တစ်အတော်လေးပိုမြန်ချဉ်းကပ် RTs ရှောင်ရှားရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညွှန်ပြ အဆိုပါ AAA နှင့် ABA အခွအေနေကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့, ဘက်လိုက်မှုရမှတ် ANOVA သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
စမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါ 62 အမျိုးသမီးတွေ,2သင်တန်းသားများ၏လိင်အင်္ဂါဒေတာထွက်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒီအတိုင်းအတာယုတ်ထံမှ4SD ကအထက်ကြောင့်အထီးပါဝင်သူများ၏ဝယ်ယူအဆင့်တစ်ခုမှာဒေတာအချက် (ဒီဒေတာကို point ရဲ့ပါဝင်ရလဒ်များကိုမပြောင်းခဲ့ဘူး) ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်အဖြစ်စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ AAT ကနေရလာဒ်ကိုတွေ့မြင် (99 သင်တန်းသားများအပေါ်အခြေခံထားတယ် စာသားမ S1 ) တိကျသောသတင်းအချက်အလက်များသည်။
, ယောက်ျား, AAA (N ကို = 49: သင်တန်းသားများကိုကျပန်းအခြေအနေများတတ်နိုင်သမျှနီးစပ်လိင်အပေါ်လိုက်ဖက်သောကန့်သတ်နှင့်အတူနှစ်ခုအခြေအနေတွင်အခြေအနေများတတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည် n = 20) နှင့် ABA (N ကို = 53; လူတို့, n = 20) ။ ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့မြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်မဟုတ်သလိုအခြေအနေများဖြတ်ပြီး vibrostimulation နှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုအတွက်အသက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားဘူး စားပွဲတင် 1 ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများ.
စားပွဲတင် 1 ။ ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများ။
ဒုတိယ, ပထမဦးဆုံးနှင့်တတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှု (ထင်းရူး, Sir, TIR တွေ့: သုံးအောင်းနေချိန်ပြတင်းပေါက်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်စာသားမ S1) ။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်စဉ်အတွင်း CSS တုံ့ပြန် penile လုံးပတ်နှင့် VPA ၏တန်းတူအဆင့်ဆင့်အတည်ပြုရန်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ထင်းရူးနှင့် Sir အဘို့, CS + နှင့် CS- ၏တင်ဆက်မှုသည်အောက်ပါလုံးပတ်သို့မဟုတ် VPA မကွာခြားချက်ကိုတွေ့ခဲ့သည်, ps> .11 CS- ကိုတုန့်ပြန်သည့် VPA TIR သည် CS + နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားသည်၊ သို့သော်ခြားနားချက်သည်သမားရိုးကျအရေးပါမှုအဆင့်သို့မရောက်နိုင်ပေ။ p <.08, = .06 ။
ပုံ 2တစ်သီးခြားစီနှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများများအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီး CS + နှင့် CS- မှ penile လုံးပတ် (TIR) ​​အကျဉ်းချုပ်။ ဝယ်ယူအဆင့် penile လုံးပတ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလှုံ့ဆော်မှု, ထင်းရူး၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား F (1, 36) = 12.39, p<.01, = .26, Sir, F(1, 35) = 83.68, p<.01, = .70, TIR, F(1,35) = 16.96, p<.01, တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် = ပု vibrostimulation အဓိပ္ပာယ် .33, တစ်ဦးလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်မှု ပုံ 2တစ်ဦး။ မြော်လင့်ဆန့်ကျင်, CS- မှ penile လုံးပတ် CS + မှနှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုကြီးမားခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ဘို့အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုရှိသမျှတို့, ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ ps> .24 နှင့်မျှမတို့သိသာ2(Stimulus) × 10 (စမ်းသပ်) အပြန်အလှန်အားလုံးရှာတွေ့ခဲ့သည် ps> .39 ။ သိသိသာသာမဟုတ်သော2(Stimulus) × 10 (Trial) ×2(Condition) နှင့်2(Stimulus) ×2(Condition) အပြန်အလှန်အားဖြင့်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ဝယ်ယူမှု၏ဤပုံစံသည်အခြေအနေများနှင့်ကွာခြားမှုမရှိပါ ps> .41 ။
ပုံ2။ (။ ) အ penile လုံးပတ်ပြောင်းလဲမှုရမှတ်ဆိုလိုနှင့်အင်္ဂါဇာတ်သွေးခုန်နှုန်းလွှဲခွင် (VPA) ကပြောင်းလဲမှုရမှတ်ဆိုလို (ခ) ။ တတိယကြားကာလတုံ့ပြန်မှုင်းဒိုး (TIR) ​​စဉ်အတွင်းကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်ဝယ်ယူအဆင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်နှင့်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- အောက်ပါ နှစ်ခုအခြေအနေများ AAA နှင့် ABA များအတွက်အဆင့်။
ဝယ်ယူအဆင့်ကာလအတွင်းတုံ့ပြန်မှုကတော့ CS + ပေါင်းအမေရိကန်တုံ့ပြန်ကိုယ်စားပြုသတိပြုပါ။
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ , အဆိုပါဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်း VPA ၏ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထင်းရူးအပေါ်နှိုးဆွတဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်မ p<.08 နှင့် Sir, p = .28 ကြောင့် VPA မြင့် CS- အောက်ပါထက် CS + ပေါင်း vibrostimulation ၏တင်ဆက်မှုသည်အောက်ပါခဲ့ကွောငျးဖေါ်ပြခြင်း, TIR အပေါ်လုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်း, F(1, 56) = 27.74, p<.01, = .33 ။ တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 2, ခအဆိုပါ vibrostimulation တစ်ဦးလိင်အင်္ဂါ arousal တုံ့ပြန်မှုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများထင်းရူး, ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်, p = .53; ခင်ဗျား p = .07; TIR p = .15 ။ သို့သော် VPA TIR ဘို့နှိုးဆွခြင်းနှင့်စမ်းသပ်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့သည်, F(5, 268) = 6.73, p<.01, စမ်းသပ်မှုတွေကျော် CS + သို့တုံ့ပြန်လိင်အင်္ဂါပေါင်း vibrostimulation နှင့် CS- အကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုညွှန်း = .11 ။ ရောင်ပြန်ဟပ်အဖြစ်ဝယ်ယူဒီပုံစံ,2(အခြေအနေ) အကျိုးသက်ရောက်မှု× 10 (စမ်းသပ်) × non-သိသိသာသာ2(နှိုးဆွ) ကအခွအေနအကြားကွဲပြားဘူး p = .85 ။
2 × 10 (စမ်းသပ်) ×အဆိုပါ2(နှိုးဆွ) (အခြေအနေ) ရောနှောထားသော ANOVA, CS- ဖို့ထက် CS + သို့အဘယ်သူမျှမခြုံငုံပိုကြီး penile တုံ့ပြန်မှုထင်ရှားမရှိ, သိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုစမ်းသပ်အပြန်အလှန်ပြသ ps> .17 ဤသည်က CS + နှင့် CS- များဆီသို့တုန့်ပြန်မှုသည်ခြားနားမှုမရှိကြောင်းညွှန်ပြပြီး၊ တုန့်ပြန်မှုပုံစံသည်မျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုများ၌မပြောင်းလဲပါ။ ထို့အပြင်အခြေအနေများအကြားခြားနားချက်များကိုမတွေ့ရပါ။ ps> .30 အပိုဆောင်း2(Stimulus) X2(အဆင့်၊ အလယ်အလတ်စမ်းသပ်မှု ၁-၄ precon နှင့်ပထမဆုံးမျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှု) ANOVA ကိုရောစပ်။ ၀ င်ရိုးအ ၀ န်းအ ၀ န်းတွင် FIR အပေါ် Stimulus ၏လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ F(1, 37) = 2.92, p<.10, SIR, F(1, 37) = 2.85, p = .10 နှင့် TIR, F(1, 37) = 2.99, p = .09 ။ သို့သော်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်စမ်းသပ်စရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှုလေ့လာခဲ့သည်, pပထမ ဦး ဆုံးမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်တုံ့ပြန်မျှအေးစက် differential ကိုညွှန်း s ကို> .80 ။ မျိုးသုဉ်းခြင်းအဆင့်တစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် Trial, FIR အတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါ p = .23; ခင်ဗျား p = .23; TIR p = .23 ။ အဆိုပါအပိုဆောင်း2(နှိုးဆွ) က X2(အဆင့်; ပေမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေး 1-4 precon နှင့်နောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး) ရောနှောထားသော ANOVA stimulus အဘို့အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, ps> .58 ။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော်၊ ၀ ယ်ယူသည့်အဆင့်တွင်လိင်အင်္ဂါမှတုန်ခါမှုလှုံ့ဆော်မှုဖြင့်အားဖြည့်ပေးသောပုံသည်မျိုးသုဉ်းခြင်းအဆင့်တွင်ပိုမိုကြီးမားသော ၀ င်ရိုးအ ၀ န်းအ ၀ န်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းမရှိဘဲအခြေအနေနှစ်ခုလုံးက CSs အားလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကွာခြားမှုမရှိပါ။ ပုံ2တစ်ဦး.
conditional တုံ့ပြန်၏အဘယ်သူမျှမရှာမှီးလည်းမရှိသည့်အခါတုံ့ပြန် conditional ၏မျိုးသုဉ်းမည်ဟုမျှော်လင့်မရနိုငျသောကွောငျ့, VPA ထင်းရူးရလဒ်များကိုအစီရင်ခံကြသည်မဟုတ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းနှိုးဆွများအတွက်အရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု, Sir ရှာတွေ့ခဲ့သည် F(1, 57) = 4.73, p<.03, = .04; TIR, F(1, 56) = 5.78, p = .02, တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် = ဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်း clitoral vibrostimulation ခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ခဲ့ပုံအဓိပ္ပာယ် .09 သည်, မျိုးသုဉ်းအဆင့်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မား VPA ထုတ်ယူခဲ့တယျ ပုံ 2, ခ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆမှအများစုမှာအလွန်အရေးပါသည် ANOVA လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်, Sir, အကြားမျှသိသာအပြန်အလှန်သက်ရောက်ပုံများအားပြသခဲ့သည် p = .21, TIR, p အဘယ်သူမျှမဆီးမခံရဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုအဓိပ္ပာယ် = .21 ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုလည်း CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကို၏ဤပုံစံ, အခြေအနေများအကြား Sir ကွာခြားမထင်ရှား p = .30, TIR, p = .91 ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ VPA Sir များအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုလြှော့ F(1, 57) = 7.74, p<.01, = .12 နှင့် TIR, F(1, 58) = 3.96, p = .05, = .06 ။ ဒါ့အပြင်နောက်ဆုံးအမျိုးသုဉ်းစုံစမ်းရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, VPA Sir များအတွက် CS- တုံ့ပြန်ထက် CS + မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မား VPA လြှော့ F(1, 57) = 4.31, p VPA TIR မကွာခြားချက်တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း = .04, p = .12 ။ တနည်းကား, CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကို၏ပုံစံ, အခြေအနေများအကြားပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးကွာခြားခဲ့ပါဘူး: ps> .24, နောက်ဆုံးမျိုးသုဉ်းစမ်းသပ်မှု: ps> .41 ။ သို့သော် Trial ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ VPA သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလျော့နည်းနေကြောင်းညွှန်ပြနေသည်။ F(4, 228) = 3.66, p<.01, = .06; TIR, F(4, 215) = 3.88, p<.01, = .07 ။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ခွအေနမြေားသုဉ်းအဆင့်စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်အခြေအနေများအတွက်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး: AAA နှင့် ABA VPA ဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်း clitoral vibrostimulation ခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ခဲ့ပုံကိုတုံ့ပြန်ရန်တန်းတူ differential ကိုပြပြီး, နှစ်ဦးစလုံးအခွအေနအဘို့ဤ differential ကိုအဘယ်သူမျှမပြည့်စုံသုဉ်းပြသခဲ့သည်တုံ့ပြန် စမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီး။ သို့သော်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများအဘို့အ VPA တွေ့မြင် (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျဆင်းခဲ့သည် ပုံ 2, ခ).
conditional တုံ့ပြန်၏အဘယ်သူမျှမရှာမှီးလည်းမရှိသည့်အခါတုံ့ပြန်အခြေအနေပြန်လည်နာလန်ထူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မရနိုငျသောကွောငျ့, လူတို့သညျအဘို့ရလဒ်များကို brevity ၏မျက်နှာကို ထောက်. ဖော်ပြခဲ့သည်မခံခဲ့ရပါ။ တူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, VPA ထင်းရူးရလဒ်များကိုအစီရင်ခံမခံခဲ့ရပါ။
အဓိကအကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်2(နှိုးဆွ) က X2(အဆင့်; နောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး)2X ကို (အခြေအနေ) ရောနှောထားသော ANOVA, stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေတစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်လြှော့, F(1, 56) = 3.10, p = ။ 08, = .05 ။ VPA Sir များအတွက်စမ်းသပ်အဆင့်၏2(နှိုးဆွ) က X3(စမ်းသပ်) X ကို2(အခြေအနေ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, VPA Sir အပေါ်နယ်စပ်ဒေသအရေးပါမှုကိုလြှော့ F(1, 102) = 3.09, p<.06 စစ်ဆေးခြင်း ပုံ 2, ခဤသက်ရောက်မှုများ CS- မှမမျှော်လင့်ဘဲကြီးမားတုံ့ပြန်မှုများကရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးသာ CS + တုံ့ပြန်မှုများအတွက်သီးခြား2(အဆင့်) က X2(အခြေအနေ) ANOVA ကောက်ယူကိုလည်းတွေ့မြင် , ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု stimulus X ကိုအခြေအနေအဘို့မြင်ကြခဲ့ပါတယ်, p = .19 ။ VPA TIR သည်ငါတို့အယူအဆ, stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေအားအလွန်အရေးပါသည့်အပြန်အလှန်မျှအရေးပါမှုကိုလြှော့, p = .19 ။ ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် VPA TIR ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 56) = 4.18, p<.05, = .07 ။ မျှော်လင့်ဆန့်ကျင်, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေမအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့သည်, p = .24 ။ TIR ကာလအတွင်းသာ CS + တုံ့ပြန်မှုများ၏အပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမရှိအရေးပါမှုကိုလြှော့, p = .39 ။ ထို့ကြောင့်, အမျိုးသမီးမျိုးသုဉ်းပြီးနောက်ဆက်စပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အပေါ်မှာ CS + သို့တုံ့ပြန်မျှတိုးမြှင့်အေးစက်လိင်အင်္ဂါကိုပြတော်မူ၏။
အမေရိကန်မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကိုအဘို့, CSS တုံ့ပြန်မကွာခြားချက်ရှိသမျှတို့, အခြေအနေများအကြားနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားရှာတွေ့ခဲ့သည် ps> .20 သို့ရာတွင်ပုဂ္ဂလဒိsexual္လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအတွက် Stimulus X Gender အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်။ p<.09 နှင့် Stimulus X အခြေအနေ X ကျား၊ p = ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဓိပ်ပာယျ .06, အ CS + rating ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အဖြစ်အနည်းငယ်ပိုပြီး arousal အဆိုပါ CS- rating နှင့်တကွ, CSS ဆီသို့ဦးတည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏ ratings အတွက်ထူးခြားတော်မှာ။
တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 3နှစ်ခုစလုံးအခြေအနေများဝယ်ယူအဆင့်ပြီးနောက် CS- vs. CS + ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကိုတစ်ကြံ့ခိုင်တိုးနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေကျော်တုံ့ပြန်ဒီ differential ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့် (ရုံးတင်စစ်ဆေး 1-4 အဓိပ်ပာ) နှင့်ပထမဦးဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းအမေရိကန်မျှော်မှန်း ratings ၏ analysis, လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 97) = 128.07, p<.01, = .57 နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမ်းသပ်တစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1, 97) = 133.49, p<.01, တစ်ဦးအေးစက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်း = .58 ။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်2× 10 (အခြေအနေ) (ကျား) ရောနှောထားသော ANOVA ×2(စမ်းသပ်) ×အဆိုပါ2(နှိုးဆွ) သည်သိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုစမ်းသပ်အပြန်အလှန်လြှော့, F(3, 283) = 47.39, p<.01, = .34 ။ အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအပြန်အလှန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, p နှစ်ဦးစလုံးအခွအေနအဓိပ်ပာယျ = .16, အ CS + ၏တင်ဆက်မှုအပြီးအမေရိကန်မျှော်လင့်တစ်ခုညီမျှအရှုံးပြသသည်။ ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ်မျှော်မှန်း ratings ၏ analysis, လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 97) 135 = ။ 09, p<.01, = .58 နှင့် stimulus X ကိုစမ်းသပ်တစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1, 97) = 118.95, p<.01, conditional တုံ့ပြန်၏မျိုးသုဉ်းညွှန်း = .55 ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ် stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအဘို့အရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်, F(1, 97) = 2.97, p<.09, AAA အခွအေနေကိုအမေရိကန်မျှော်မှန်းထားသည်ပိုမိုအားနည်းအရှုံးဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ။ ပထမမျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှုကိုလေ့လာခြင်းသည် Stimulus အတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေသည်။ F(1, 97) = 147.36, p<.01, = .60 ။ အလားတူပင်ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလည်းနှိုးဆွများအတွက်အရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 95) = 9.61, p<.01, = .09, ဒါပေမယ့်လည်းနှိုးဆွ X ကိုအခြေအနေတစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1, 95) = 4.02, p<.05, = .04 ။ ဒါကနောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် CS + နှင့် CS- တုံ့ပြန်အမေရိကန်မျှော်မှန်းအတွက် ABA အခြေအနေတစ်ခုကွာခြားချက်နေဆဲရှိ၏ဖော်ပြသည်။ ပေါင်းလဒ်အတွက်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည် CS + ၏တင်ဆက်မှုအပြီးအမေရိကန်မျှော်လင့်တစ်ခုညီမျှအရှုံးပြသသည်။
ပုံ3။ နှစ်ခုအခြေအနေများ AAA နှင့် ABA အတွက်ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်စဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- အောက်ပါအမေရိကန်မျှော်မှန်း ratings, လူမျိုးသုဉ်းအဆင့်နှင့်စမ်းသပ်မှုအဆင့် (ထိပ်) နှင့်အမျိုးသမီး (အောက်ခြေ) ။
အကျိုးသက်ရောက်စေ Value ကို:.
ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့မြင်ခြင်း, ဝယ်ယူအဆင့်ပြီးနောက်တုံ့ပြန်အခြေအနေများအတွက်ကွဲပြား ပုံ 4။ မိန်းမတို့အဘို့, နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများဝယ်ယူအဆင့်ပြီးနောက် CS- vs. CS + ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောကြံ့ခိုင်တိုးပြသခဲ့သည်, ဤ differential ကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုတွေကျော်တုံ့ပြန်။
ပုံ4။ အဆိုပါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်စဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- အောက်ပါပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏ ratings ယင်းအခြေအနေနှစ်ခု AAA နှင့် ABA အတွက်ယောက်ျား (ထိပ်) နှင့်မိန်းမတို့အဘို့သုဉ်းအဆင့်နှင့်စမ်းသပ်မှုအဆင့် (အောက်ခြေ) ။
အဆိုပါ2(နှိုးဆွ) က X2(အဆင့်; ပေမဲ့ Precon ရုံးတင်စစ်ဆေး 1-4 နှင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး) ကိုထိခိုက်စေတန်ဖိုးကို ratings ၏ X ကို2(အခြေအနေ) X ကို2(ကျား) ရောနှောထားသော ANOVA stimulus X ကိုစမ်းသပ်တစ်ခုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 97) = 29.73, p<.01, = .24 ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုကျားများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, F(1, 97) = 16.95, p<.01, = .15 ။ အဆိုပါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်နှင့်သီးခြားစီယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏လေ့လာဆန်းစစ်, ယောက်ျားဘို့နှိုးဆွ X ကိုအဆင့်အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန်လြှော့ F(1, 38) = 1.59, p = .22 ။ ဤသည်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပေါ်တုံ့ပြန်ယောက်ျားတို့အတွက်ထိခိုက်စေခြင်းမရှိ conditional ရှိခဲ့သည်ဆိုတာကိုပြသ ပုံ 4။ မိန်းမတို့အဘို့, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုအဆင့်များအတွက်အရေးပါသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့ F(1, 59) = 52.92, p<.01, = .47 ။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, မျိုးသုဉ်းအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိသိသာသာ stimulus X ကိုစမ်းသပ်အပြန်အလှန်ပြ F(4, 378) = 8.92, p<.01, = .09, အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွက်ခြားနားချက် CS + နှင့် CS- အကြားကိုထိခိုက်ကြောင်းညွှန်ပြတဖြည်းဖြည်းသုဉ်းပါဝငျသောစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါ ANOVA အဘယ်သူမျှမနှိုးဆွ X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအပြန်အလှန်လြှော့ F(4, 378) = 0.62, p = .65, ဒါပေမယ့်တစ်သိသာထင်ရှားသောစီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုစမ်းသပ် X ကိုကျားအပြန်အလှန်လိုက်လျောခဲ့တယျ F(4, 378) = 7.52, p<.01, = .07 ။
ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏အပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်စမ်းသပ်များအတွက်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုထင်ရှား F(1, 96) = 17.66, p<.01, = .16 နှင့် stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုကျား, F(1, 96) = 14.37, p<.01, = .13 ။ stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအဘို့အဘယ်သူမျှမကသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့သည်, p = .54 ။ ဆိုလိုသည်မှာအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးသည်တုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုလုံး ၀ ဆုံးရှုံးမှုကိုပြသော်လည်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမျိုးသမီးများ၏တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးမျိုးသုဉ်းခြင်းစမ်းသပ်မှု၏ထပ်ဆင့်ဆန်းစစ်ချက်များအရအမျိုးသားများအတွက် Stimulus X Trial အတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ F(1, 37) = 0.10, p = အဘယ်သူမျှမဆီးမခံရဖို့အဓိပ္ပာယ် .76, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, အမျိုးသမီးအဘို့ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ stimulus X ကိုစမ်းသပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 59) = 34.47, p<.01, မျိုးသုဉ်းညွှန်း = .37 ။ ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ analysis လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 97) = 28.19, p<.01, = .23 နှင့် stimulus X ကိုကျားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1, 97) = 19.28, p<.01, = .17 ။ ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ analysis နေဆဲလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 97) = 5.69, p = .02, အဆိုပါ CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကိုညွှန်ပြ = .06 ။
ပုံ4ရှိုးပွဲတုံ့ပြန် conditional ပါဝငျသောမျိုးသုဉ်းအဆင့်၏ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် CS + ဆီသို့ဦးတည်လိင်စိတ်နိုးထ၏ ratings တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ2(နှိုးဆွ) က X2(အဆင့်; ပေမဲ့ Precon ရုံးတင်စစ်ဆေး 1-4 နှင့်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး) X ကို2(အခြေအနေ) X ကို2(ကျား) လိင်စိတ်နိုးထ၏ ratings ၏ရောနှောထားသော ANOVA, stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုကျားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်လြှော့, F(1, 94) = 5.69, p = .02, = .06 ။ အဆိုပါကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်၏နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ရုံးတင်စစ်ဆေး 1-4 အဓိပ်ပာ) နှင့်သီးခြားစီအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး, ယောက်ျားဘို့နှိုးဆွ X ကိုအဆင့်များအတွက်အရေးပါသော interaction ကလြှော့, F(1, 36) = 6.73, p<.02, = .16 နှင့်အမျိုးသမီးများ, F(1, 58) = 38.20, p<.01, တုံ့ပြန် Conditions ကိုညွှန်း = .40 ။ သို့သော်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 4အမျိုးသမီးများသည်တုံ့ပြန်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်း conditional ပြသ။ ထို့အပွငျမြော်လင့်နှင့်အညီ, အမျိုးသုဉ်းအဆင့်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိသိသာသာ stimulus X ကိုစမ်းသပ်အပြန်အလှန်လြှော့, F(4, 404) = 6.93, p<.01, အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေကျော်တုံ့ပြန်တဲ့ကျဆင်းခြင်းအဓိပ္ပာယ် = .07 ။ stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအပြန်အလှန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်မဟုတ်ပါ, p နောက်တဖန် = .96, ဒါပေမယ့် stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုကျားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်, F(4, 404) = 3.72, p<.01, = .04 ။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထဘို့, နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများတုံ့ပြန် differential ကိုဆုံးရှုံးအတွက်ကွဲပြားဘူး, ထိုသုဉ်းဖြစ်ပါတယ်။ တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်သို့သော်အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသားများထက်သုဉ်းအဆင့်စဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- မှ differential ကို ratings ၏ကြီးမြတ်သောအရှုံးပြသ ပုံ 4.
ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ analysis, stimulus X ကိုစမ်းသပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့ F(1, 97) = 21.0, p<.01, အေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏မျိုးသုဉ်းညွှန်း = .18 ။ သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘယ်သူမျှမက, p = .93, Conditions တုံ့ပြန်၏မျိုးသုဉ်းအတွက်အခြေအနေများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုကိုညွှန်း။ နောက်တဖန်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုကျားများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်, F(1, 97) = 7.32, p<.01, = .07 ။ ပထမဦးဆုံးနှင့်စမ်းသပ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းဘို့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့သီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။ လူတို့သညျအဘို့, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်စမ်းသပ်စရာသိသိသာသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့ p = .27 နှင့် stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအပြန်အလှန်, p အခြေအနေများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဆီးမခံရဖို့အဓိပ္ပာယ် = .80, ။ မိန်းမတို့အဘို့, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုစမ်းသပ်အဘို့အဓိပ်ပာယျလြှော့ F(1, 60) = 37.22, p<.01, တုံ့ပြန် conditional differential ကို၏မျိုးသုဉ်းအဓိပ္ပာယ် = .38 ။ အုပ်စုများအကြားဘယ်သူမျှမကအခြေအနေအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်, stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအပြန်အလှန်၏ဤဆုံးရှုံးမှုအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, p = .84 ။
ပထမဦးဆုံးအမျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ analysis လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အရေးပါသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 97) = 41.38, p<.01, = .30 နှင့် stimulus X ကိုကျားများအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, F(1, 97) = 4.36, p = .04, = .04 ။ ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေး၏ analysis ကိုလည်းလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 97) = 9.67, p<.01, = .09 ရှိနေဆဲနောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကိုခဲ့ပါတယ်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမမရှိတော့မြို့သားကွာခြားခဲ့ပါဘူးညွှန်ပြ။
အဆိုပါ2(နှိုးဆွ) က X2(အဆင့်; နောက်ဆုံးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး) အမေရိကန်မျှော်မှန်း၏ ratings ၏ X ကို2(အခြေအနေ) X ကို2(ကျား) ရောနှောထားသော ANOVA, stimulus X ကိုအဆင့်အဘို့အဓိပ်ပာယျလြှော့, F(1, 94) = 10.01, p<.01, = .10 နှင့်အဓိကစိတ်ဝင်စားကြောင်း, stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေများ၏အပြန်အလှန်အဘို့, F(1, 94) = 8.44, p<.01, = .08 ။ စမ်းသပ်အဆင့်၏နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုစမ်းသပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်လြှော့ F(2, 153) = 9.11, p<.01, = .09 နှင့် stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအဘို့, F(2, 153) = 8.31, p<.01, = .08 ။ တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် ပုံ 3ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအခြေအနေတွင် switch ရဲ့ရလဒ်အတိုင်း, စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် CS + ဆီသို့အမေရိကန်မျှော်မှန်း၏ပြန်လည်နာလန်ထူပြသခဲ့သည်။ ၏စစ်ဆေးရေး ပုံ3ထို့အပြင် ABA အခြေအနေအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်အကြံပေး။ ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးသာ CS- တုံ့ပြန်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏အပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုအခြေအနေအဘို့ယောက်ျားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 94) = 12.05, p<.01, = .11, တိုးမြှင့်အမေရိကန်မျှော်မှန်းညွှန်ပြလည်းအခြေအနေတွင် switch ရဲ့ရလဒ်အဖြစ် CS- အတိုင်းလိုက်နာလိမ့်မယ်။
ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စုံစမ်းရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုအခြေအနေအဘို့အသိသာ interaction ကလြှော့, F(1, 95) = 5.32, p = .02, = .05 နှင့် stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေဘို့ငါတို့အယူအဆအားအလွန်အရေးပါ, F(1, 95) = 5.76, p = .02, = .06 ။ ထို့အပွငျသိသာ interaction ကလည်းနှိုးဆွ X ကိုအခြေအနေက X ကျားများအတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်, F(1, 95) = 4.21, p = .04, = .04 နှင့် stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေ X ကိုကျား, F(1, 95) = 8.20, p<.01, = .08 ။ လူတို့သညျကိုထိခိုက်တန်ဖိုးကို ratings ပေါ်တွင်ဝယ်ယူအဆင့်ပြီးနောက်တုံ့ပြန် conditional မပြခဲ့ပါဘူးကတည်းကယောက်ျားများအတွက်နောက်ထပ်ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံမခံခဲ့ရပါ။
မိန်းမတို့အဘို့သီးခြားစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသိသာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, F(1, 59) = 13.82, p<.01, = .19 ။ ၏စစ်ဆေးရေး ပုံ4ထို့အပြင် ABA အခြေအနေမိန်းမတို့အဘို့ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်အကြံပေး။ ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် CS- ဆီသို့သာအကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကို ratings များအတွက်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏အပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်လြှော့, F(1, 59) = 3.01, p<.09 ။ မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့် CS- သို့အကျိုးသက်ရောက်သည့်တန်ဖိုးကိုဆိုလိုသည်။
စမ်းသပ်အဆင့် analysis, stimulus X ကိုအခြေအနေအဘို့အခေတ်ရေစီးကြောင်းလြှော့, p<.08 နှင့် Stimulus X Trial X အခြေအနေအတွက်၊ p = .07 ။ ထို့ပြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ stimulus X ကိုအခြေအနေက X ကျားများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်လြှော့, p<.06 Stimulus X Condition ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအခြေအနေများသည် CS + နှင့် CS- ကိုတုံ့ပြန်သည့်ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ ABA အခွအေနေအေးစက်တုံ့ပြန်မှု၏ပြန်လည်နာလန်ထူပြသ CS- နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုအပြုသဘောအဖြစ် CS + အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ Trial X Condition X ကျားမ၏သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအခြေအနေနှစ်ခုကြားတွင်တုန့်ပြန်မှုမှာကွဲပြားမှုရှိကြောင်းဖော်ပြသည် ပုံ 4။ အမြိုးသမီးမြားအတှကျသက်တမ်းတိုးအဆင့်အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, stimulus X ကိုစမ်းသပ် X ကိုအခြေအနေအဘို့အသိသာ interaction ကလြှော့, F(2, 101) = 3.41, p = .04, = .06 ။
ပြီးခဲ့သည့်မျိုးသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်လေ့လာခြင်း, stimulus X ကိုအခြေအနေအဘို့အဓိပ်ပာယျလြှော့, F(1, 94) = 8.21, p<.01, stimulus X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေများအတွက် = .08 နှင့်အရေးအပါဆုံး, F(1, 94) = 5.17, p = .03, = .05 ။ ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု X ကိုအခြေအနေက X ကျားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ, F(1, 94) = 5.41, p = .02, = .05 ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အသီးခြားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, အမျိုးသားများတွင်လှုံ့ဆော်မှု X ကိုအဆင့် X ကိုအခြေအနေမအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား, p = ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသော်လည်း .54, အမျိုးသမီးတစ်ဦးသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုလြှော့, F(1, 58) = 7.35 p<.01, = .11, အဓိပ္ပာယ်ကိုအခြေအနေတွင် switch ကိုသာအမျိုးသမီးများလေ့လာတွေ့ရှိပြီးနောက်တုံ့ပြန်အေးစက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ စမ်းသပ်အဆင့်၏နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, stimulus X ကိုစမ်းသပ်မှုအတွက်သိသိသာသာအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုထင်ရှား F(2, 175) = 7.64, p<.01, = .08 နှင့် stimulus X ကိုအခြေအနေက X ကျားများအတွက်, F(1, 93) = 4.63, p = .03, = .05 ။ ၏စစ်ဆေးရေး ပုံ5လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကဤအအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အ ABA ခွအေနအေများအတွက်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် CS + မှအမျိုးသမီးပိုကြီးတဲ့တုံ့ပြန်မှုများကရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ယောက်ျား, စမ်းသပ်မှုအဆင့်ထပ်တိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, stimulus X ကိုစမ်းသပ်အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန်လြှော့ p အမြိုးသမီးမြားအဘို့ဤအပြန်အလှန်သိသာခဲ့သော်လည်း = .25, F(2, 101) = 9.39, p<.01, = .14 ။ လူတို့သညျအဘို့နှိုးဆွဘို့အသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့သည်, F(1, 35) = 4.69, p<.04, = .12 ။
ပုံ5။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှစ်ခုအခြေအနေများ AAA နှင့် ABA အတွက်ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အဆင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်နှင့်လူတို့၏အဘို့စမ်းသပ်အဆင့် (ထိပ်) နှင့်အမျိုးသမီး (အောက်ခြေ) စဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- အောက်ပါ ratings အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
tဘက်လိုက်မှုရမှတ်များကြည့်ရှုစီအခွအေနေအတွင်းသုညကနေသိသိသာသာသွေဖည်လျှင် -tests စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည် စားပွဲတင် 2။ AAT ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက် (CS + CS-, CS-ရောနှောနှင့်ကြားနေတ္ထု) အဖြစ်အကြား-ဘာသာရပ်အချက်နှင့်ပုံရိပ်အဖြစ်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုအခြေအနေနှင့်အတူရောထွေး ANOVA နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်အတွက်ကွာခြားချက်များ။ မျှော်လင့်ဆန့်ကျင်မျှအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို X ကိုအခြေအနေအဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်, p = .28 ။ အဆိုပါအခြေအနေနှစ်ခုကနေသင်တန်းသားများကိုချဉ်းကပ်ထဲမှာကွာခြားအပေါင်းတို့နှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုဖြတ်ပြီးသဘောထားတွေ avoidance ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်အခြေအနေများအတွက်အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ခဲ့သည်, F(1, 95) = 5.17, p<.03, = .05, အ ABA အခြေအနေသင်တန်းသားများအဘို့အလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ပိုပြီးချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုထင်ဟပ်။ မျှော်လင့်ဆန့်ကျင်, Image ကိုမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါသည်, p = .62, ဒါပေမယ့်တစ် Image ကို X ကိုကျားများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်တခုရှိ၏, F(3, 258) = 2.39, p<.08, ဆိုလိုသည်မှာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားမှုကိုဆိုလိုသည်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုအရယောက်ျားနှင့်မိန်းမများသည် CS + ဘက်လိုက်မှုရမှတ်တွင်ကွဲပြားကြောင်း၊ t(97) = -2.20, p = .03 ။ အမျိုးသမီးများနေ့လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် CS + ချဉ်းကပ်ထဲမှာပိုမြန်ခဲ့သညျ။ သူတို့ကဒီအရေးပါမှု၏သမားရိုးကျအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးသော်လည်း CS- ချဉ်းကပ်တွင်လည်းပိုမိုမြန်ဆန်သို့သော်ခဲ့ကြသည်, t(97) = -1.66, p<.10
စားပွဲတင်2။ CS + CS- များအတွက်ပေမဲ့ချဉ်းကပ်ရှောင်ရှား Task ကို (AAT) ဘက်လိုက်မှုရမှတ်များအတွက် one-နမူနာ t-စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်, ထို AAA နှင့် ABA အခြေအနေအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် CS-ရောနှောနှင့်ကြားနေပုံရိပ်တွေ။
အပိုဆောင်းဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည် conditional တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်။ ကျနော်တို့အေးစက်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏ခွန်အားအပြုသဘောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal နှင့်အမေရိကန်မျှော်မှန်းပမာဏနှင့်ဆက်စပ်သောလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထား။ ထို့အပြင်ကအေးစက်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏တန်ခိုးကား CS + ဘက်လိုက်မှုရမှတ်မှအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဤအဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စေရန်, လိင်အင်္ဂါ Sir နှင့် TIR အပေါ်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ၏ ratings နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အမေရိကန်မျှော်မှန်းသည်မျိုးသုဉ်းအဆင့်အတွင်းပထမဆုံးရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း CS + နှင့် CS- ဖို့တုန့်ပြန်အကြားကွာခြားချက်ဟာနုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့သည် အဆိုပါ CS + မှတုံ့ပြန်မှုကနေ CS- တုံ့ပြန်။ Pearson ကပထမသုဉ်းရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းလိင်အင်္ဂါခြားနားချက်ရမှတ်အကြားကုန်ပစ္စည်း-ယခုအချိန်တွင်ဆက်စပ်မှု, ခြားနားချက်ရမှတ်, ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထခြားနားချက်ရမှတ်အမေရိကန်မျှော်မှန်း ratings ခြားနားချက်ရမှတ်များထိခိုက်စေ, တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 3).
စားပွဲတင်3။ conditional လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်အကြားဆက်စပ်မှု, ကိုထိခိုက်ပြောင်းလဲမှု, အေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအေးစက်, အမေရိကန်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် CSS ဆီသို့ဦးတည်မျှော်မှန်းခြင်းနှင့် conditional ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကိုအေးစက်။
စားပွဲတင်3အဆိုပါအေးစက်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်နှင့်အမျိုးသားများတွင်အေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံများ၏ခွန်အားအကြားမျှအရေးပါသောဆက်စပ်မှုရှိပြသထားတယ်။ သို့သျောလညျးအမြိုးသမီးမြားထဲမှာ, အေးစက်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏ခွန်အားပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal နှင့်အမေရိကန်မျှော်မှန်းအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ပမာဏမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အေးစက်လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏ခွန်အားကိုလည်း CS + ဘက်လိုက်မှုရမှတ်၏ပြင်းအားမှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အ CS- ဘက်လိုက်မှုရမှတ်ထိုကဲ့သို့သောဆက်စပ်မပြခဲ့ပါဘူး။
ယခုလေ့လာမှုသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများလေ့လာသင်ယူမှုဆိုင်ရာယန္တရားများနှင့်ပတ်သက်သောစာပေများတိုးပွားလာခြင်းနှင့် Bouton ၏ဆက်စပ်အခြေအနေ၏သုသေတနပြုမှုသီအိုရီ၏အထောက်အပံ့ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသီအိုရီအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုတွေ့ရှိရခြင်းသည်မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အမှန်အားဖြင့်လူတို့၏အခြေအနေရှိလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲနောက်ခံအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လေ့လာမှုအသစ်များပါဝင်သည်။ မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီးတွင်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသိသိသာသာများပြားလာခြင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးရှိ CS- နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမေရိကန်၏မျှော်မှန်းထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ABA အခြေအနေ) (ABA အခြေအနေ) တွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ အခြေအနေပြောင်းလဲမှု (AAA အခွအေနေ) ၏မရှိခြင်း။ ဤရလဒ်သည်အရေးကြီးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခုအချိန်အထိလိင်မှုကိစ္စတွင်မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုလူ့လေ့လာမှုများတွင်လေ့လာခြင်းမရှိသေးပါ။
သို့ရာတွင်ထိုသို့အားလုံးမဟုတ်ယူဆချက်ကိုအတည်ပြုကြသည်ဟုဖော်ပြထားခြင်းအရေးပါသည်။ ပထမဦးစွာသက်တမ်းတိုးဘို့အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်အင်္ဂါအစီအမံများအတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ လူတို့သညျအဘို့, ဒီလိင်အင်္ဂါအေးစက်သက်ရောက်မှုရယူကြသည်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တကွနောင်ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများထွက်ထားမည်။ သက်တမ်းတိုးဘို့စမ်းသပ်ဖို့နိုင်စေရန်, Conditions တုံ့ပြန်၏ဝယ်ယူဝယ်ယူအဆင့်စဉ်အတွင်းစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခံရဖို့ရှိပါတယ်။ အလားတူပင်ဤလူတို့သညျစမ်းသပ်အဆင့်အတွင်းထိခိုက်စေ conditional ပုဂ္ဂလဒိဋ္၏သက်တမ်းတိုးမပြခဲ့ဘူးသောတွေ့ရှိချက်ကရှင်းပြသည်။
အမြိုးသမီးမြားတုံ့ပြန်အေးစက်လိင်အင်္ဂါပြသခဲ့သည်ပေမယ်သို့သော်, တုံ့ပြန်ထိုကဲ့သို့သောမရှိသက်တမ်းတိုးလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိန်းမတို့အဘို့တုံ့ပြန်အေးစက်သက်တမ်းတိုးလိင်အင်္ဂါ၏မရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်၏မျိုးသုဉ်းလုံးဝမျိုးသုဉ်းအဆင့်စဉ်အတွင်းစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးမဟုတ်အခါဒီရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ အမြိုးသမီးမြားကတည်းကကတုံ့ပြန် differential ကိုလိင်အင်္ဂါ၏အဘယ်သူမျှမပြည့်စုံသုဉ်းခြင်းမရှိသက်တမ်းတိုးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်လုံးဝအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးပြသခဲ့သည်။ ယောက်ျားအေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏မျိုးသုဉ်းသရုပ်ပြမပြုခဲ့သကဲ့သို့အလားတူထုံးစံ၌, တုံ့ပြန် conditional ၏သက်တမ်းတိုးစမ်းသပ်အဆင့်စဉ်အတွင်း detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့သကဲ့သို့လူများ conditional ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကျိုးသက်ရောက်စေမပြခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားအမေရိကန်-အကဲဖြတ်အတွက်ခြားနားချက်ဒီအကောင့်နိုင်သည်ကိုခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ conditional အထီးလိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်၏မရှိခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့သည် vibrostimulation ယောက်ျားသည်ထက်မိန်းမတို့အဘို့ပိုပြီးထိရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခဲ့ပုံရသည်။ Rowland နှင့် Slob  penile vibrotactile ဆွသိသိသာသာကျန်းမာ, လိင်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတိတ်ခွေများမျက်မှောက်၌ erectile တုံ့ပြန်မှုကိုကြီးထွားများပြားစေကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့ကခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ရန်တစ်ဦးတည်း vibrotactile ဆွတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့အမျိုးသားတွေသလောက်အမျိုးသမီးတွေပြုသကဲ့သို့ထို vibrostimulation ကြိုက်ခဲ့သည်မှကြေညာခဲ့သည်။ လည်းလိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီအမံအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအေးစက်သက်ရောက်မှုများကရောင်ပြန်ဟပ်ယောက်ျားများအတွက်လျော့နည်းလိင်စိတ်နိုးထဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်ဖို့ vibrostimulation ထိုသို့လုံးဝယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်မဟုတ်ပြုလုပ်ခြင်း။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုအပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအမေရိကန်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကလစ်ပ်နှင့်အတူပေါင်းစပ် vibrotactile ဆွစဉ်းစားပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုခေါ်ဆောင်သွား '' plasticity '' ရှိအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ် , လူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာခေါ်ဆောင်သွားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုများမှာ ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းမှအခြားလေ့လာမှုကနေရလာဒ် (brom et al ။ , ပြင်ဆင်မှုအတွက်) ဒီအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ တူညီသောအမေရိကန်၏အသုံးချနေနေစဉ်သာခြားနားချက်ကဲ့သို့တူညီသောပါရာဒိုင်းအသုံးပြုခြင်း, ဒါပေမယ့်လိင်သက်ဆိုင်ရာ CSS အတူကြံ့ခိုင် conditional လိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ထိခိုက်စေ, သူတပါးအတွက်ကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် non-အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်နှင့်ကြားနေ CSS ၏ပေါင်းစပ်ယောက်ျားအတွက်တုံ့ပြန် conditional လိင်အင်္ဂါထုတ်ယူနိုင်ရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူးပုံရသည်။ လိင်အင်္ဂါ arousal မှလေးစားမှုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုစုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုအထောက်အကူပြုရန် ,  တစ်ဦးထိတွေ့နိုင်သောအမေရိကန်၏အသုံးချနေကြသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအနည်းဆုံးလူတို့အတွက်ထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းတဲ့ယန္တရားကိုထောကျပံ့ဘူးသော်လည်းအမျိုးသမီးများကိုလိင်, ပိုင်းတွင်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်နိုင်။ သို့သော်အမေရိကန်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏အသုံးချနေသူတစ်ဦးကနဦးကြားနေ CS (ကတစ်ပြားမှအိုး) ဆီသို့ဦးတည်အေးစက်တုံ့ပြန်မှု Plaud နှင့် Martini အားဖြင့်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ ။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးထူထောင်ကြသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ယောက်ျားကသူတို့တီထွင် preference ကိုကနေသိပ်ကွာခြားကြောင်းတွေကိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုနည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာ , , ။ သို့သော်ကြားနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ CSS နဲ့အမြင်အာရုံနှင့် vibrotactile USS နှစ်ဦးစလုံး၏အသုံးချနေယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အနာဂတ်သုတေသန, ဤအကြောင်းကိုအပြီးသတ်သောဖြစ်ပြုရပါမည်။
ယောက်ျား conditional လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်အစောပိုင်းကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်လေ့လာမှုများနှင့်အတူလိုင်း၌တည်ရှိ၏မပြခဲ့ဘူးသောတွေ့ရှိချက်ပေမယ့် ဤတွေ့ရှိချက်ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ပိုမိုလက်ခံသောတည်ဆဲစိတ်ကူးဆန့်ကျင် , ။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အတွက်ကျားမကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကုမ္ပဏီတခုကောက်ချက်ဆွဲနိုင်မီနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုပိုမိုလေ့လာမှုများလိုအပ်နေပါသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလေ့လာတွေ့ရှိကွဲပြားခြားနားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အတွက်စင်ကြယ်သောကျား, မကွဲပြားမှုပြန်ပါလာမည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်လည်းနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အမေရိကန်ထိရောက်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းအထူးသဖြင့်တစ်ဦးကြားနေ CS အတူလိင်ကအေးစက်တုံ့ပြန်မှုယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ဖြစ်တွေ့ပါပြီကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းသင့်တယ် , ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်စမ်းသပ်မှုအတွက် Klucken et al ။  ထို့အပြင် CRS (ဎ = 40) ကိုရှာဖွေ, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတိုးလာသင်တန်းသားများကိုအရေအတွက် (ဎ = 100) Klucken et al ၏အသုံးချနေကြဘူး။  ကိုပြု၏။ ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေရလဒ်အတွက်တစ်ဦးရှင်းပြချက်ပါဝါလျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကနဦးတွင်ကြားနေတွေကိုတစ်ဦးလိင်အကြိုးရလဒျနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မျှသာတွဲဖက်မှုမှတဆင့်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုထုတ်ယူပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်စိတ်ခံစားမှုသီအိုရီလိင်စိတ်နိုးထ, မည်သည့်စိတ်ခံစားမှုများကဲ့သို့, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံ, ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသဘောတစ်ခုပေါင်းစပ်ကြောင်းအဆိုပြု -။ တချို့ကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ပြည်နယ်စိတ်ခံစားမှုအဓိကအားဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုတွင်ထင်ဟပ်ဖြစ်ကြောင်းအရေးယူသဘောထားတွေရှိပါတယ် , ။ Pavlovian ဆုလာဘ်သင်ယူမှုမှတဆင့် install လုပ်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကိုပေးခြင်းအရေးယူသို့ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်: ထိုကဲ့သို့သောမူဘောင်များတွင်တစ်ဦး CS တဲ့လိင်ဆုချီးအမေရိကန်နှင့်အတူတွဲဖက်ပြီးနောက်လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှု elicits ဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်း CS လည်းတစ်ခုချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကို elicits ကြောင်းဆိုလို။ အဆိုပါ AAA အခြေအနေအမျိုးသမီးတွေအားလုံးလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ပု CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်ချဉ်းကပ်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့် ABA အခွအေနေခဲ့ပေမယ့်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်, ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုသိသိသာသာပိုမြန်မိန်းမနှင့်, vibrostimulation နှင့်အတူတွဲခဲ့သည့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုဆီသို့ဦးတည်သွယ်ဝိုက်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုအတွက်ကွဲပြား ယောက်ျားထက် CS + ချဉ်းကပ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် CS + လူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်း။ ဤသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံ, ဇီဝကမ္မအစီအမံများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသဘောထဲမှာသို့ဘာသာပြန်ထားသောအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအေးစက်။ တစ်လျော့နည်းကြံ့ခိုင် conditional အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလေ့လာတွေ့ရှိသောတွေ့ရှိချက်ပေးသောအားချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုမျှော်လင့်ထားလို့မရပါ။
မျှော်လင့်ချက်များဆန့်ကျင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှအခြားအေးစက်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုနှင့်အညီ (brom et al ။ ပြင်ဆင်မှုအတွက်), ယောက်ျား vibrostimulation စဉ်အတွင်းအချိန်ပြကွက်ပေါ်တွင်ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း CS- နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ CS + မှတုန့်ပြန်နေတဲ့သေးငယ် penile လုံးပတ်ပြ လည်းမရှိတော့ vibrostimulation လျှောက်ထားသောအခါအချိန်ပြကွက်ပေါ်မှာ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်တည်ပြီးသတ်တယ်အနက်ကိုမှကိုယ်နှိုက်ကချေးမထားဘူး။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအလိုအလျှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်ဟောင်းတဦးသုတေသနလုပ်ငန်းလည်းအထီးလိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုဟာခန့်မှန်းဖို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တွေ့ရှိ: လိင်ရစေတယ်ပစ်မှတ်ဆီသို့ဦးတည်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုကြားနေပစ်မှတ်ရစေတယ်ဖို့ထက်နိမ့်ခဲ့ကြတယ် ။ သူများသည်ရလဒ်များကို penile စိုက်ထူ၏ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ခဲ့ကြသည်။ erectile တုံ့ပြန်မှုများ၏ကနဦးအဆင့်စဉ်အတွင်းလိင်တံအရှည်တစ်ခုတိုးလာခြင်းကိုသည်းခံ, ဤလုံးပတ်တစ်ဦးတစ်ပြိုင်နက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်, penile စိုက်ထူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုလည်းလက်ရှိလေ့လာမှုမှာတွေ့ရတဲ့ရလဒ်တွေကိုများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။
အတော်လေးစိတ်ရှုပ်စေသောအဆိုပါ CS- များအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်တမ်းတိုးသက်ရောက်မှုများလေ့လာကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံအပေါ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ Vervliet, Baeyens, ဗန်တွင်း Bergh နှင့် Herman  တုံ့ပြန်၌ဤတိုးလူ့အလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းနှင့် reinstatement အပေါ်လေ့လာမှုများအတွက်အတော်လေးဘုံကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီ CS- တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိတော့စမ်းသပ်မှုအဆင့်အတွက်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခြင်းဟာ CS- အားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာဝယ်ယူအဆင့်အတွက် CS- အမေရိကန်နှင့်အတူ inhibitory အသင်းအဖွဲ့များရရှိသည်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ စကားစပ်ပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်, ဒီတားစီးနှောင့်အယှက်နိုင်ပါသည်။ တားစီး: ကမျိုးသုဉ်း၏အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဝေမျှစေခြင်းငှါအဖြစ် Vervliet နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအဆိုအရ CS- ထို့ကြောင့်အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်လှုံ့ဆော်မှုမည်မဟုတ်ပါ။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ဦးကန့်အသတ်တစ်ခုဘာသာရပ်များအကြား (unpaired) ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင်ယူမှုအထူးသဖြင့်လူတို့သညျအဘို့, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ CS + နှင့် CS- ဆီသို့တိုးမြှင့်လိင်အင်္ဂါ arousal အေးစက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကြားဖြတ်အေးစက်ကြောင့်ခဲ့လျှင်ပစ္စုပ္ပန်မှာမရှင်းလင်းသည်။ လိင်စိတ်နိုးထ၏အကဲဆတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိလျက်နှင့်မနှုန်း se အဆိုပါ CS + နှင့် CS- ဆီသို့ဦးတည်တုံ့ပြန် differential ကိုတိုးမြှင်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မယ် ,။ ထို့ကြောင့်, အနာဂတ်သုတေသနအတွက်ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အသုံးချနေနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
အစာစားချင်စိတ်တုံ့ပြန်မှုများအေးစက်အပေါ်အစောပိုင်းကသုတေသနနှင့်အညီ ကျနော်တို့ဂန္ထဝင်အေးစက်နေဖြင့်ထုတ်လုပ်အားလုံးမဟုတ်အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအားတူညီသောဖက်ရှင်အတွက်စည်းရုံးဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ တဦးတည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအမေရိကန်မျှော်မှန်းနှင့် CSS ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings သလောက်အမေရိကန်၏ nonspecific ာင်းသက်ရောက်မှုလွှမ်းမိုးမှုမခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုသင်တန်းသားများကို CS + တင်ပြသည့်အခါတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကိုခံရရန်မျှော်လင့်ထားရန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်နှင့် CS- တင်ပြသည့်အခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကိုခံရဖို့မကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ conditional ပုဂ္ဂလဒိဋ္ထိခိုက်စေခြင်းနှင့် arousal ကြောင်းအကြံပြုနှင့် conditional ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်လိင်အင်္ဂါ arousal conditional အမေရိကန်မျှော်လင့်ထားကှာခွား။ ဒါကမတူကွဲပြားသက်သေအထောက်အထားနဲ့အခြားအစာစားချင်စိတ် Paradigm (ဥပမာနီကိုတင်းစွဲလမ်း) တွင်ထိုကဲ့သို့သောအစီအမံများအကြားအလားတူကှာဟဘို့လည်းမရှိရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက်ရသောတစ်ဦးထက်ပိုအခြေခံခြားနားချက်, ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်သရုပ်ပြလုပ်ခဲ့တယ်မျှော်မှန်းသောအခြေအနေများအပေါ်သက်ရောက်မှုတန်ဖိုးအေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အခြေအနေများကိုလိင်အင်္ဂါ arousal ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အေးစက်။ အမျိုးသားများတွင်အမေရိကန်မျှော်မှန်းအနည်းငယ်အေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်အေးစက်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကြောင့်မဖြစ်သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာယောက်ျားအတွက်, အေးစက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထမြင့်မား, Conditions ကိုထိခိုက်တန်ဖိုးကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထမသော်လည်းအမေရိကန်မျှော်မှန်း, ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ထိခိုက်စေ, သူတပါးအတွက်အေးစက်၏ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းလက်၌လက်သို့သွားစေခြင်းငှါ: ဤကွဲပြားခြားနားသောတုံ့ပြန်မှုစနစ်များကိုအမြဲတမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ synchrony အတွက်ပြုမူကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည် အကျိုးသက်ရောက်စေတန်ဖိုးကို, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်ဖို့မထင်။ ဂန္အေးစက်နေဖြင့်ထုတ်လုပ်သောသူတို့အားအမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအားအခြားအစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ) တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Paradigm သို့မဟုတ်လျှင်ထိုပုံစံတိကျတဲ့လျှင်နောက်ထပ်သုတေသနအလင်းသငျ့သညျ။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို hypo- နှင့် hypersexuality ကဲ့သို့သောသင်ယူအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်လိမ့်မည်။ ကုသမှုအခြေအနေတွင်ထွက်ခွာသည့်အခါလက်တွေ့အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့ Extrapolating, တုံ့ပြန် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သက်တမ်းတိုးသည့် relapse လူနာအတွေ့အကြုံကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုကထောက်ပံ့, တကသင်ယူအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမမှန်များ၏ကုသမှုထဲမှာကတခြားအခင်းအကျင်းနှင့်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူသုဉ်း၏ General အားဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းကုသမှုပြီးနောက် relapse လျှော့ချရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ hypersexuality သို့မဟုတ် paraphilia မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဒီပြဿနာအပြုအမူတွေ့ကြုံသောအတွက်အခြေအနေတွင် (ဥပမာအနီရောင်-အလင်းခရိုင်) တွင်ကုသမှုနည်းစနစ်လျှောက်ထားဆိုလိုနိုင်ဘူး။
ဒါကြောင့်ကုထုံးအစည်းအဝေးများအတွက်အခြေအနေများသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကွောငျးထငျရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သို့သော်အမြဲတမ်းတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရာဝတ္ထု, အခြေအနေသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာလူနာပြန်သွားကြသည်ဖို့အတှကျအခြို့သောစွန့်စားမှုရှိရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မျိုးသုဉ်းလုပျထုံးလုပျနညျးစဉ်အတွင်း hippocampus-မှီခိုဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့ modulate ကြောင်းဖြစ်စဉ်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့အလွန်အလားအလာရှုထောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ glutamatergic N-methyl-D-aspartate (NMDA) အဲဒီ receptor ရေရှည်အလားအလာ, သင်ယူမှုနှင့်မျိုးသုဉ်းအခြေခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်စဉ်းစားသည် ။ D-cycloserine (DCS), တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း NMDA အဲဒီ receptor agonist, ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပြသထားသည် , ကြောက်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူမျိုးသုဉ်းအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်လူသားများတွင် ။ ဆန္ဒရှိသုဉ်းမှတ်ဉာဏ်အတွက် pharmacological အေးဂျင့်အပေါ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အလားအလာရလဒ်များကိုသူတို့လည်းအစာစားချင်စိတ်မမှန်၏မျိုးသုဉ်းလုပျထုံးလုပျနညျးအတွက်သက်ဆိုင်ရှိမရှိသိရန်အလို့ငှာ, အစာစားချင်စိတ်အေးစက် Paradigm ပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ဒီလူသားတွေအတွက် conditional လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မျှော်မှန်း၏သက်တမ်းတိုးဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ပထမဦးဆုံးလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနလိင်အင်္ဂါများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအခြေအနေတွင်အပြောင်းအလဲများမှမျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် sensitivity ကိုနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားပြုမူပုံပေါ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ရလဒ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏မြော်လင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ် Contextual တွေကိုအားဖြင့်နှိုးဆွထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာလာနိုငျကွောငျးပါစေ။ ဤသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအခြေခံသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်များလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်အပေါ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်နှင့်တကွ pharmacological လွှမ်းမိုးမှု၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးကြောင်းစေသည်။
စာသားမ S1 ။
ဒေတာကို S1 ။
လိင်အင်္ဂါမှာ Data: ယောက်ျား။
ဒေတာကို S2 ။
လိင်အင်္ဂါမှာ Data: အမျိုးသမီးတွေ။
ဒေတာကို S3 ။
အဆိုပါစာရေးဆရာဒေတာစုဆောင်းမှာသူတို့ရဲ့အကူအညီအတွက် Nynke ချင်း-A-အဆီ, ပြစ်ကိလ Bensdorp, လူးကပ်စ Bouwman နှင့် Ashray Dihal ကျေးဇူးတင်ဖို့အလိုရှိ၏။ စာရေးသူလည်းတုံ့ပြန်အထီးလိင်အင်္ဂါသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးတော်မူသည်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့်အဲ Janssen များအတွက် Huybert ဗန်က de stadt ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: ကို MB SB ။ ကို MB: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ကို MB SB ။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့: ကို MB SB ။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏အရေးအသားမှလှူဒါန်းခဲ့: ကို MB SB EL WE ဆာ။
1 ။ Bouton ME (2002) ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို, မရေရာဒွိဟနှင့်နားမလည်: အမူအကျင့်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက် relapse ၏သတင်းရင်းမြစ်များ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 52: 976-986 ။ Doi: 10.1016 / s0006-3223 (02) 01546-9
2 ။ Thewissen R ကို, Snijders SJBD, Havermans RC, ဗန်တွင်း Hout M က, မီးခိုးမှ cue-ရူးနှမ်းစေ့ဆျော၏ Jansen တစ်ဦးက (2006) သက်တမ်းတိုး: cue ထိတွေ့ကုသမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Beh Res Ther 44: 1441-1449 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2005.10.010
3 ။ ဂန္အေးစက်အတွက် Bouton ME, Moody EW (2004) မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 28: 663-674 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2004.09.001
4 ။ Nakajima က S, Tanaka က S, Urushihara K ကိုသင်တန်းအခြေအနေတွင်မှပြန်လာအပေါ်သို့ငြိမ်းအေးလီဗာစာနယ်ဇင်းတုံ့ပြန်မှု၏ Imada H ကို (2000) သက်တမ်းတိုး။ 31-416: လှုံ့ဆော် 431 လေ့လာပါ။ Doi: 10.1006 / lmot.2000.1064
5 ။ Crombag HS, Grimm JW, Shaham Y ကို (2002) မူးယစ်ဆက်စပ် Contextual တွေကိုမှ reexposure အားဖြင့်ရှာကြံကင်း၏သက်တမ်းတိုးအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacol 27: 1006-1015 ။ Doi: 10.1016 / s0893-133x (02) 00356-1
6 ။ Bindra: D (1974) သင်ယူမှု, စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးအမြင်။ Psychol ဗြာ 81: 199-213 ။ Doi: 10.1037 / h0036330
7 ။ အဆိုတော် B, Toates FM ရေ (1987) လိင်လှုံ့ဆျောမှု။ J ကိုလိင် Res 23: 481-501 ။ Doi: 10.1080 / 00224498709551386
8 ။ di Chiara, G (1995) လှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မူးယစ်ဆေးအရက် Depen 38: 95-137 ။ Doi: 10.1016 / 0376-8716 (95) 01118-i
9 ။ brom M က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine နှစ်ယောက်စလုံးက S, Laan အီး, Everaerd W က, Spinhoven P ကို ​​(2014) အခန်းကဏ္ဍ: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 38: 38-59 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2013.10.014
10 ။ Pavlov ငါ (1927) reflex အေးစက်။ အောက်စဖို့, UKOxford Univ ။ စာနယ်ဇင်းများ
11 ။ Pavlovian အေးစက်အတွက် Delamater AR (2004) စမ်းသပ်သုဉ်း: အမူအကျင့်များနှင့် neuroscience အမြင်များ။ QJ Exp Psychol: comp Phys Psychol 57: 97-132 ။ Doi: 10.1080 / 02724990344000097
12 ။ လူ့ကြောက်လန့်သောအခြေအနေများတွင် Herman: D, Craske MG, Susan Mineka S က, Lovibond PF (2006) Extinction ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 60: 361-368 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2005.10.006
13 ။ Myers KM, Carlezon WA, Davis က M ကို (2011) အချိုမှုမျိုးသုဉ်းအတွက် receptors နှင့်စိတ်ရောဂါနာမကျန်းများအတွက်သုဉ်း-based ကုထုံး။ Neuropsychopharmacol 36: 274-293 ။ Doi: 10.1038 / npp.2010.88
14 ။ Rescorla RA (2001) ငွိမျး Pavlovian လှုံ့ဆော်မှုများပြန်လေ့ကျင့်။ J ကို Exp Psychol: Animation ပြုမူနေ Pro ကို 27: 115-124 ။ Doi: 10.1037 // 0097-7403.27.2.115
15 ။ Bouton ME (2004) ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းအတွက်အမူအကျင့်ဖြစ်စဉ်များ။ 11-485: Mem ကို 494 လေ့လာပါ။ Doi: 10.1101 / lm.78804
16 ။ တစ်ဦးသက်တမ်းတိုးပါရာဒိုင်းလူ့ကွောကျရှံ့သောအသင်းအဖွဲ့များ၏ Effting M က, Kindt M (2007) Contextual ထိန်းချုပ်မှု။ Beh Res Ther 45: 2002-2018 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2007.02.011
17 ။ Kalisch R ကို, Korenfeld အီး, Stephan Ke, Weiskopf N ကို, Seymour B, et al ။ (2006) context-မှီခိုလူ့သုဉ်းမှတ်ဉာဏ်တစ် ventromedial prefrontal နှင့် hippocampal ကွန်ယက်ကိုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ J ကို neuroscience 26: 9503-9511 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.2021-06.2006
18 ။ အရက်မှီခိုပြင်ပလူနာအကြားအရက်သေစာ cue reactivity ကို၏သက်တမ်းတိုးအပေါ်သုဉ်းအခြေအနေတွင်နှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းတွေကို Stasiewicz PR စနစ်, Brandon TH, Bradizza CM (2007) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychol စွဲ Behav21: 244-248 ။ Doi: 10.1037 / 0893-164x.21.2.244
19 ။ Vansteenwegen: D, Herman: D, Vervliet B, Francken, G, Becker T က, et al ။ မူရင်းဝယ်ယူအခြေအနေတွင်ဖို့ပြန်လာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လူသားတစ်ဦး differential ကိုအေးစက်ပါရာဒိုင်းအတွက်ကြောက်စိတ် (2005) သို့ပြန်သွားသည်။ Beh Res Ther 43: 323-336 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2004.01.001
20 ။ ဗန် Gucht: D, Vansteenwegen D ကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွင်သုဉ်းပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုတွေအသွေးဆောင်ချောကလက်တဏှာ၏ Becker T က, ဗန်တွင်း Bergh အို (2008) သို့ပြန်သွားသည် for: တဏှာအကြားမတူကွဲပြားနဲ့ချောကလက်စားရန်မျှော်လင့်။ Beh Res Ther 46: 375-391 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2008.01.003
21 ။ Kafka M (1994) Paraphilia-Related Disorders-အဖြစ်များသည့်လစျြလြူရှု, နှင့်နားလည်မှုလွဲ။ ဟားဗတ် Rev Psychiatry 2: 39-40 ။ Doi: 10.3109 / 10673229409017112
22 ။ Kuzma JM, Black က DW (2008) ကူးစက်ရောဂါ, ပျံ့နှံ့နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကသဘာဝသမိုင်း။ မြောက်အမေရိက, 31 ၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ Philadelphia တွင်, PA: WB Saunders ကုမ္ပဏီ။
23 ။ Pfaus JG, Kippin TE, Centeno S ကို (2001) အခြေအနေများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ 40: 291-321 ။ Doi: 10.1006 / hbeh.2001.1686
24 ။ Hoffman ဟာ H ကို, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Janssen အီး, Turner SL (2004), Classical အေးစက်: ကွဲပြားအသိအမြင်နှင့် conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဇီဝဆက်စပ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 33: 43-53 ။ Doi: 10.1023 / b: aseb.0000007461.59019.d3
25 ။ Klucken T က, Schweckendiek J ကို, ခရစ်ယာန် J ကို, Merz CJ, Tabbert K သည်, et al ။ conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူ၏ (2009) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med 6: 3071-3085 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01405.x
26 ။ Klucken T က, Wehrum S က, Schweckendiek J ကို, Merz CJ, Hennig J ကို, et al ။ (2013) က 5-HTTLPR polymorphic စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နေစဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Hum ဦးနှောက် Mapp 34: 2549-2560 ။ Doi: 10.1002 / hbm.22085
27 ။ Berridge KC (1996) စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်: လိုသောနဲ့ like နှိပ်များ၏ဦးနှောက်ကိုအလွှာဟာ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 20: 1-25 ။ Doi: 10.1016 / 0149-7634 (95) 00033-ခ
28 ။ Oei N ကို, Rombouts S က, Soeter R ကို, Gerven J ကို, နှစ်ဦးစလုံး S ကို (2012) Dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု modulates ။ Neuropsychopharmacol 37: 1729-1737 ။ Doi: 10.1038 / npp.2012.19
29 ။ Schultz W က (2006) အပြုအမူသီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ Annu ဗြာ Psychol 57: 87-115 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.56.091103.070229
30 ။ et al Lombardo သင်္ဘော MV, Ashwin အီး, Auyeung B, Chakrabarti B က, လိုင် MC ။ လူသားတွေအတွက်အကျိုးကို system ပေါ်တွင် testosterone ဟော်မုန်း၏ (2012) သန္ဓေသား programming ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အမူအကျင့်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 72: 839-847 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2012.05.027
31 ။ Dewing P ကို, ချင်းမိုင် CWK, et al Sinchak K ကို Sim H ကို, Fernagut PO ။ အထီး-တိကျတဲ့အချက် SRY အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက် function ကို၏ (2006) တိုက်ရိုက်စည်းမျဉ်း။ Curr Biol 16: 415-420 ။ Doi: 10.1016 / j.cub.2006.01.017
32 ။ Sisk CL, Foster DL (2004) အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ နတ် neuroscience 7: 1040-1047 ။ Doi: 10.1038 / nn1326
33 ။ Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန်ငွေကျပ် (2004) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ် neuroscience 7: 411-416 ။ Doi: 10.1038 / nn1208
34 ။ Coria-Avila GA (2012) ကြွက်များတွင်လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံဖက်ဦးစားပေးအပေါ်အေးစက်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Socioaffect neuroscience Psychol 2: 17340 ။ Doi: 10.3402 / snp.v2i0.17340
35 ။ ခေါ်ဆောင်သွား plasticity အတွက် Baumeister RF (2000) ကျားကွဲပြားခြားနားမှု: လူမှုရေးအရပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်အမျိုးသမီးလိင် drive တခုဖြစ်တယ်။ Psychol Bull 126: 347-374 ။ Doi: 10.1037 // 0033-2909.126.3.347
36 ။ အလိုအလျှောက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၏ Chen က M ကို, Bargh ဂျေအေ (1999) အကျိုးဆက်များ: အနှိုးဆွချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်ချက်ချင်းအပြုအမူဓာတ်။ Pers Soc Psychol Bull 25: 215-224 ။ Doi: 10.1177 / 0146167299025002007
37 ။ Bancroft JHJ, ဂျုံးစ် HG, Pullen BRA (1966) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအပေါ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူ penile စိုက်ထူတိုင်းတာခြင်းများအတွက်ရိုးရှင်းသော transducer ။ Beh Res Ther 4: 239-241 ။ Doi: 10.1016 / 0005-7967 (66) 90015-5
38 ။ Janssen အီး, Prause N ကို, Geer J ကို (2006) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစနစ်။ ခုနှစ်တွင်: Cacioppo JT, Tassinary LG က, Berntson, GG (Eds ။ ), Psychophysiology, ed ၏လက်စွဲစာအုပ်။ နယူး YorkCambridge တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း
39 ။ အမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ Laan အီး, Everaerd W ကအမြဲတစ်ဦးက (1995) အကဲဖြတ်: တုံ့ပြန်မှုတိကျတဲ့နှင့်တရားဝင်မှုတည်ဆောက်ရန်။ Psychophysiol 32: 476-485 ။ Doi: 10.1111 / j.1469-8986.1995.tb02099.x
40 ။ Cousijn J ကို, Goudriaan AE, Wiers RW (2011) ဆေးခြောက်ကိုဦးတည်ထွက်ဆီသို့ရောက်ရှိ: ချဉ်းကပ်-ဘက်လိုက်မှုမိုးသည်းထန်စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများသည်အတွက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ စှဲလမျးသူ 106: 1667-1674 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2011.03475.x
41 ။ Wiers RW, Rinck M က, Kordts R ကို, Houben K ကို Strack က F (2010) အန္တရာယ်ရှိသောသောက်အတွက်အရက်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့လိုအလျှောက်အရေးယူ-သဘောထားတွေ Retraining ။ စှဲလမျးသူ 105: 279-287 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2009.02775.x
42 ။ Cohen ကိုဂျေ (1988) ယင်းအပြုအမူသိပ္ပံအဘို့အစာရင်းအင်းပါဝါအားသုံးသပ်ခြင်း (2nd ed ။ ), နယူးဂျာစီ: Lawrence Erlbaum Associates မှ။
43 ။ S က, Laan အီး, Spiering M က, Nilsson T က, Oomens S က, et al နှစ်ဦးစလုံး။ (2008) အစာစားချင်စိတ်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဆန္ဒရှိဂန္ထဝင်အေးစက်။ J ကိုလိင် Med 5: 1386-1401 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.00815.x
44 ။ , Brauer M က S, အမျိုးသမီးများအတွင်းလိင်တုံ့ပြန်မှု Laan အီး (2011), Classical အေးစက်နှစ်ဦးစလုံး: တစ်ပွားလေ့လာမှု။ J ကိုလိင် Med 8: 3116-3131 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2011.02453.x
45 ။ Rowland DL, Slob AK (1992) Vibrotactile ဆွလိင်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်လိင်စိတ်နိုးထပိုကောင်းစေပါတယ်: စိုက်ထူ၏ concomitant အစီအမံကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုတစ်ခု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 21: 387-400 ။ Doi: 10.1007 / bf01542027
46 ။ Plaud JJ, Martini R ကို (1999) အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏တုံ့ပြန်အေးစက်။ BehavModif 23: 254-268 ။ Doi: 10.1177 / 0145445599232004
47 ။ Meta-analysis သည်: အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Self-အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါအတိုင်းအတာ၏ Chivers ML, Seto MC, Lalumière M က, Laan အီး, Grimbos T က (2010) သဘောတူညီချက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 5-56 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9556-9
48 ။ O'Donohue WT, Plaud JJ (1994) လူ့လိင်စိတ်နိုးထ၏အေးစက်။ Arch လိင်ပြုမူနေ 23: 321-344 ။ Doi: 10.1007 / bf01541567
49 ။ လိင်သုတေသနအပေါ် Everaerd W က (1988) Commentary: လိင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ J ကို Psychol Hum လိင် 1: 3-15 ။
50 ။ Janssen အီး, Everaerd W က, Spiering M က, Janssen J ကို (2000) အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အကဲဖြတ်: လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်ဆီသို့။ J ကိုလိင် Res 37: 8-23 ။ Doi: 10.1080 / 00224490009552016
51 ။ Mauss ခလရ, ရော်ဘင်ဆင် MD (2009) စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဆောင်ရွက်ချက်များ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဆောင်ရွက်ချက်များ: စိတ်ခံစားမှုတစ်ခု reviewMeasures: တစ်ဦးက reviewCogn Emotion 23: 209-237 ။ Doi: 10.1080 / 02699930802204677
52 ။ Frijda နယူးဟမ်းရှား (2010) Impulse အရေးယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ Biol Psychol 84: 570-579 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsycho.2010.01.005
53. Lang PJ (1985) စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏သိမြင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒ: ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်း။ AH Tuma & JD Maser (Eds ။ )၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုင်ရာပြordersနာများ (စစ။ ၁၃၀-၁၇၀) တွင်။ Hillsdale, NJ: Erlbaum ။
54 ။ Vervliet B, Baeyens က F, ဗန်တွင်း Bergh အို Herman: D (2013) Extinction, General ကြောက်၏ပြန်လာ: လူသားများတွင်သက်တမ်းတိုးသုတေသနတစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ Biol Psychol 92: 51-58 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsycho.2012.01.006
55 ။ Domjan M (2010) လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်အပြုအမူများ၏အခြေခံမူ (6thed ။ ) ။ Belmont,, CA: Wadsworth Cengage ထုတ်ဝေရေး။
56 ။ Hoffman ဟာ H ကို, Goodrich: D, Wilson က M ကို, Janssen အီး (2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပ: တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာပါ။ လိင်စွဲ compulsive 21: 75-91 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.895460
57 ။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် setting တွင် Reichelt AC အလီ JLC (2013) မှတ်ဉာဏ် reconsolidation ။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience 7: 118 ။
58 ။ Ledgerwood L ကိုရစ်ချတ်ဆင် R ကို, Conditions ခဲ၏မျိုးသုဉ်းအပေါ် D-cycloserine ၏ Cranney J ကို (2003) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ neuroscience 117: 341-349 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.117.2.341
59 ။ ကြွက်များတွင်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ် Walker က DL, Ressler KJ, Lu က KT, Conditions ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးသုဉ်း၏ Davis က M ကို (2002) နည်းပြစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ် D-cycloserine ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdala တာဟာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ J ကို neuroscience 22: 2343-2351 ။